နည်းပညာ - လိုတရအိမ်ကလေးမှကြိုဆိုပါတယ်...
တကယ်တော့Virus အနွယ်ဝင် အမျိုးအစားများရှိနေပါတယ်။အဲဒါတွေအကြောင်းရှင်းလင်းပြထားတဲ့ မေးလ်တစ်ခု ရောက်ရှိလာတာကြောင့် ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
၁။Computer VirusComputer virus ဆိုတာ သူ့ကိုသူ attach လုပ်ထားတဲ့ program (သို့) fileတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာတစ်ခုကနေ တစ်ခုကိုပြန့်ှနှံ့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်..လူတွေမှာ Virus ကူးသလိုပဲ ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ System ကိုပုံမှန်အလုပ်မလုပ်အောင် နှောက်ယှက်မယ်၊ Windowsကို Error တွေများလာအောင်လုပ်မယ်၊ user data တွေကို ဖျက်ဆီးမယ်၊ Hardwareတွေ Software တွေ အရေးကြီးတဲ့ File တွေကို ဖျက်ဆီးမယ်... စတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် Virus အများစုဟာ executable fileတွေဖြစ်ကြပါတယ်.. ဥပမာ.. chrome.exe, system.bat , flashy.comစသဖြင့်ပေါ့ .. သူတို့ဟာကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိနေရင်တောင်မှ သင်ကိုယ်တိုင်မှသွားမဖွင့်ရင်/ သွားမ run မိရင် ကွန်ပျူတာကို ဘာမှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး...ဒါကြောင့် မှတ်ထားရမှာက လူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မပါဝင်ပဲ Computer Virus သည်မပျံ့နှံ့ မကူးစက်နိုင်ပါ...Virus ပျံ့နှံ့နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်...forward E-mail က attached file တွေ၊ memorystick(flash/thumb drives) တွေ၊ Full sharing ကနေ virus infected fileထည့်တာတွေ၊ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း မသိပဲနဲ့ Virus infected file ကိုshare လုပ်မိတာတွေ .. စသဖြင့်ပေါ့...ဗျာ
၂။MalwareMalwareဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကား ၂ လုံး Malicious Software ကိုပေါင်းစပ်ပြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေက အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့ virus လို program တွေပါပဲ.. အဲဒိMalware ကကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ၊ မသိစေပဲ singlecomputer / server / computer network ထဲ ၀င်ပြီး ကွန်ပျူတာ Systemပျက်ဆီးစေနိုင်အောင် ၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် ရေးလေ့ရှိကြပါတယ်..Malware တစ်ခုမှာ Computer VIrus , worms, trojan horses, most rootkits,spyware, dishonest adware, crimeware and other malicious and unwantedsoftware တွေပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်..
၃။wormworm ဆိုတာက virusနဲ့ဆင်တူအောင်ရေးထားကြတာပါပဲ.. virus တစ်ခုရဲ့ Sub-classလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်... သူကတော့ Virus လို လူကဖြန့်မှပျံ့တာမျိူးမဟုတ်ပဲ သူပါသူ Computer network ထဲမှာရှိတဲ့အခြားကွန်ပျူတာတွေကို လူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လုံးဝမပါပဲနဲ့ပျံ့နှံ့စေတာဖြစ်ပါတယ်...သူ့ပါသူ ဖြန့်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိတာပေါ့နော်...အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်ကတော့ သူ က သူ့ပါသူ System file တစ်ခုလိုအယောင်ဆောင်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ သန်းပေါင်း ၁၀၀ လောက် copy ပွားနိုင်ပါတယ်၊Hard disk ရဲ့ used space ကို များလာစေတယ်..Computer ရဲ့ System memoryusage တွေ များလာစေတယ်.. network bandwidth တွေကိုတက်လာစေတယ်... Runထားတဲ့ program တွေကို not responding ခဏခဏဖြစ်လာစေတယ်.. လူသိများတဲ့ wormကတော့ Blaster worm ပါ.. ထွင်လိုက်တဲ့လူကတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်းက အသက်၁၈နှစ် အရွယ် Jeffrey Lee Parson ဖြစ်ပြီး ထောင် ၁၈ လ ကျသွားခဲ့ပါတယ်..Blaster worm က windows စတက်တာနဲ့ Registry ကီးHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunwindows autoupdate = msblast.exe မှာ နေရာယူပါတယ် ၊ msblast.exe ဆိုတာက တော့နာမည်တူပေးထားတာပေါ့Blaster worm က Computer System ထဲမှာရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ Cracker တွေက ကွန်ပျူတာကို Remote လုပ်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ရေးထားပါတယ်..
၄။Trojan horseTrojan horse ကို Trojan လို့လည်းခေါ်ပါတယ်..Trojan ဆိုတဲ့မြင်းရုပ်ကြီးအကြောင်း ငယ်ငယ်က ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာသင်ဖူးကြမှာပေါ့.. Triဇာတ်ကားလည်း ကြည့်ဖူးကြမှာပါ... အဲဒိထဲကလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်... :P ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးဝင်တဲ့Software တွေမှာ ထည့်ထားတတ်ကြပါတယ်... ဥပမာပေါ့ဗျာ... Game တစ်ခုကိုInstall ပြီးဆော့နေပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာ Hacker တွေ Cracker တွေကကွန်ပျူတာထဲကို ၀င်မွှေနေလို့ရအောင်လုပ်ပေးနေတယ်.. အဲဒီတော့ အဲဒိ Game ကိုTrojan horse လို့ခေါ်တာပေါ့ .. တစ်ကယ်တော့ Game က တရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ Gameပဲ.. ဒါပေမယ့် Virus infected ဖြစ်နေတဲ့ Game လို့ပြောရလိုဖြစ်နေတာပေါ့..နမူနာ Trojan Horse ကတော့ waterfalls.scr ဆိုတဲ့ free waterfall screen saver ပဲဖြစ်ပါတယ်..
Trojan horse တစ်ခုဟာ အောက်ပါအချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်...* Remote Access* Data Destruction* Downloader/dropper* Server Trojan(Proxy, FTP , IRC, Email, HTTP/HTTPS, etc.)* Disable security software* Denial-of-service attack (DoS)
၅။Spywareသူကတော့ သူခိုးပေါ့နော်.. Spy တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာသိကြမှာပါ.. သူလဲအဲလိုပါပဲ...သူက ကွန်ပျူတာကို ထိခိုက်ဖျက်ဆီးချင်မှ ဖျက်ဆီးမယ်.. ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာမှာသုံးနေတဲ့ user ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော အချက်အလက်တွေ၊ အရေးကြီးတဲ့Data တွေကို သူ့ရဲ့ Main server တစ်ခုခုကို နေ့စဉ် သတင်းပို့ပေးနေတယ်...Spyware တွေက များသောအားဖြင့် Web browser တွေကနေ ၀င်နိုင်ပါတယ်...ပြီးရင် သူက Browser home page ကိုပြောင်းထားတတ်ပါတယ်..သင့်ကို Errormessage တွေ အမျိုးမျိုးပြမယ်..(ဥပမာ- သင့်ကွန်ပျူတာမှာ problemsတွေများနေပြီ..အဲဒါတွေပြင်ချင်ရင် အောက်ကခလုတ်ကို နှိပ်ပါ) စသဖြင့်ဆွဲဆောင်မယ်၊ သင်က link တစ်ခုကို click လိုက်ပေမယ့် သင်မဖွင့်ပဲနဲ့ အခြားPorn Site တွေ အလိုလိုပွင့်လာမယ် စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ... တစ်ချို့ လူတွေက httpcookie တွေကို Spyware တွေလို့ ထင်ကြပါတယ်.. တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်အဲဒိ cookie ထဲမှာ Spyware က track လုပ်နိုင်တဲ့ Data တွေပါလာတတ်တာကြောင့် Spyware Remover တော်တော်များများက Cookie တွေကို ဖျက်ပစ်ကြတာပါ.Spyware ကို ကာကွယ်ချင်ရင်တော့ pop-ups ကျလာတဲ့ link တွေကိုရှောင်တာကောင်းပါတယ်... Free Spyware Removerတွေနဲ့လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်...
၆။AdwareAdware ဆိုတာကတော့Advertising-supported software (သို့) software packageတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.... သူကတော့ Screen မှာ Automatic ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးထားပြီးDownload အတင်းလုပ်ခိုင်းပါတယ်... :Dအချို့သော Adware များဟာ Spyware များဖြစ်တတ်ကြပါတယ်... ဒါကတော့ဒီလောက်ပဲ :D
၇။CrimewareCrimeware ဆိုတာကတော့ Spyware, Adware, Malwareအမျိုးအစားတွေထဲမှာပါပါတယ်.. သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ financial crimeတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးကြတာများပါတယ်..သူက user password တွေ၊ linksတွေ၊ အချက်အလက်တွေ ကို မှတ်သားထားနိုင်ပြီး သူ့ကို Run ထားတဲ့လူကပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြီး user data တွေကို ခိုးယူနိုင်တာပေါ့.... ဥပမာပြောရရင်ခုခေတ်စားနေတဲ့ key logger တို့ .. keystroke logging software တို့ဟာ Crimeware အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်..
MIRC ကိုဝင်လိုက်ပါ continue ကိုနှိပ် ဘောက်စ်တစ်ခုကျလာပြီးရင် server ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
MIRC option ထဲမှာ contant > servers > add ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..ကျလာတဲ့ဘောက်စ်ထဲမှာ..Description: ထဲမှာ baganIRC server: ထဲမှာ hardcore.myanmarlinux.orgPorts: ထဲမှာ 443Group: ထဲမှာ chatလို့ ရိုက်ထည့်ပြိး add ကိုနှိပ် ok ပေးလိုက်ပါ...အောက်ကျလာတဲ့ဘောက်စ်ထဲမှာ.../nick မိမိကြိုက်တဲ့နာမည်...(နှစ်နှင်နာမည်ကြားတွင် space တစ်ချက်) အန်းဒါးခေါက်ပါ...ပြီးလျှင်/serverhardcore.myanmarlinux.org 443 လို့ရိုက် အန်းဒါးခေါက်...အဲဒီမှာမျက်စိနောက်အောင်မလိုအပ်တဲ့ဘောက်စ်တွေကျလာရင်ဖျက်ပလိုက်ပါ...မလိုလို့လေ...ဟိဟိ/msg nickserv register မိမိနှစ်သက်ရာpassword နှင် gmailလိပ်စာရိုက်ချလိုက်ပါ...ပြီးတော့အန်းဒါးပေါ့နော်...ပြီးရင်သုံးမိနစ်ခန့် စောင့်ပါဆိုတဲ့ message ပေါ်လာရင် စောင့်လိုက်ပေါ့နော်.. အဟဲတစ်ခုတော့ရှိတယ်...တစ်ယောက်တစ်ဝက်ပေါ့နော့်အော်မှားလို့...တခါတလေ တော်တော်စောင့်ရတယ်ဗျအဲဒါကြောင့် အပေါ်မျှားလေးကိုနှိပ်အန်းဒါးခေါက်ခဏခဏလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့...နော်အဲပြီးရင်တော့/msg Nickserv PROCEEDဆိုတာလေးထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...အဲဒါလေးကိုဆလပ်မှတ်ပြီးအောက်မှာpaste ချလိုက်ပါ ပြီးရင်Your password is: ............ ပေါ်လာလိမ့်မယ်...အဲဒါလေးကို လည်းမှတ်ပြီး paste ချလိုက်ပါ..အန်းဒါးခေါက်ပေါ့နော်...ပြီးရင်/join #ygnchat အန်းဒါးခေါက်လိုက်ပြီးရင်တော့ရပါပြီဗျာ...(MIRC မှာဆလပ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ကော်ပီကူးပြီးသားပါ )ဥပမာကျွန်တော်လုပ်ထားတာလေပြလိုက်မယ်နော်.../nick rawaisoe/serverhardcore.myanmarlinux.org 443/msg nickserv register 123456789 rawaisoe@gmail.com/msg NickServ PROCEED 73m8gn9Ho/join #ygnchat
(၁)Start Menu ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေဖို့
Start ကိုနှိပ်ပါ။ Run box ကိုဖွင့်ပါ။ Regedit လို့ရိုက်ပါ။ (Registryeditor ကိုဆိုလိုတာပါ။)
ဘယ်ဘက် panel မှာ "HEYCURRENT USER" ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီထဲ ကမှ"control panel" ကို ထပ်ရွေးပါ။ "Control panel" ထဲကမှ Desktop ကိုရွေးပါ။ ညာဘက်အကွက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ "Menushowdelay" ကို Right clickနှိပ်ပါ။ Modify ကိုရွေးပြီး Value ကို "0″ ထားပါ။ ပြီးပြီဆိုတာနဲ့Restart ပြန်လုပ်ပါ။
(၂)မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်ရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။- Start ကိုသွားပါ။- Run box ကိုဖွင့်ပါ။- "gpedit.msc" ဆိုပြီး ရိုက်ပါ။- ဘယ်ဘက် panel မှာ "computer configuration" ရွေးပါ။- "Administrative Templates" ကိုရွေပါ။- "Windows components" ကို ရွေးချယ်ပါ။- "Terminal services" ကိုရွေးချယ်ပါ။- ညာဘက် panel မှာ ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့ "Do not delete Temp Folder Uponexit" မှာ Right click နှိပ်ပါ။- Properties ကို ရွေးချယ်ပါ။- ပြီးရင် "disable" ကို ရွေးချယ်ပါ။
(၃)မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်ရင် ပိုမို မြန်ဆန် စေပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုး ရှင်းနည်း ရှိပါသေးတယ်။- Start ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Run box ကိုဖွင့်ပါ်။- "% temp%" လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။- အဲဒီမှာ တွေ့သမျှ ဖိုင်တွေကို 'Ctrl+A' နဲ့ Select ပေးပြီးဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ။ (အချို့  လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖိုင်တွေကိုတော့ ဖျက်လို့မရတဲ့အကြောင်း ပြောလာတတ်ပါတယ်။)
(၄)မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်ရင် ပိုမို မြန်ဆန် စေပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုး ရှင်းနည်း ရှိပါသေးတယ်။- Start > Run box ကိုဖွင့်ပါ။- "Prefetch" လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။- တွေ့သမျှ ဖိုင်မှန်သမျှ ဖျက်ပစ်ပါ။
(၅)Hard disk ကို အချိန်ရှိသရွေ့  ရှင်းလင်းပေးပါ။- All Program ကိုသွားပါ။- Accessories ကနေတစ်ဆင့် "System tools" အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ "Disk CleanUp" ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ၅ မိနှစ်အတွင်းမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေမှန်သမျှကို ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ (ကိုယ်အနေနဲ့ အပြင်ကို ခဏတဖြုတ်သွားမယ့် အချိန်မျိုးတွေမှာ သိပ်အသုံးဝင်ပါတယ်။)
(၆)မသုံးတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပါ။- Start > Run- "msconfig" လို့ရိုက်ပါ။- "System configuration Utility" box ပေါ်လာပါမယ်။- ညာဘက် အစွန်းဆုံးမှာ "Start up tab" ဆိုတာ ရှိပါတယ်။- ကိုယ့်အတွက် အသုံးမ၀င်တဲ့ program တွေရဲ့  ရှေ့  မှာ အမှန်ခြစ် အမှတ်အသား လုပ်ထားခဲ့ရင် ပြန်ပြီး "uncheck" လုပ်ပေးပါ။- Restart နဲ့ ပြန်စပါ။
(၇)လုံခြုံစေဖို့ ဖိုင်စနှစ် ပြောင်းသုံးပါ။- Start > all programs > accessories > command prompt တစ်ခုချင်းကလစ်နှိပ်ပြီး သွားပါ။- Command pormpt ပေါ်လာရင် အနက် screen ကြီးကို တွေ့ရပါမယ်။- မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် cursor လေးနဲ့ "convert c:fs:ntfs" လို့ရိုက်ပါ။- ပြီးရင် 'Enter' ခေါက်ပါ။- Command prompt ကို နောက် တစ်မျိုး "Start > Run" မှာ cmd လို့ရိုက်ထည့်ပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။- တကယ်လို့ NTFS ပြောင်းပြီးသား ဆိုရင် ပြောင်းဖို့ မလိုပါ။ My computerကို Right Click နှိ်ပ်ပြီး "properties" မှာဖွင့်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။- cmd ထဲဝင်ပြီး ပြန်ထွက်မရ ဖြစ်နေရင် "exit" လို့ရိုက်ပြီး ထွက်ပါ။
(၈)Memory ပိုမို အလုပ်လုပ်စေနိုင်ဖို့- XP ရဲ့ default မှာ memory ရေရှည် အသုံးခံနိုင်အောင်နဲ့ တခြားလိုအပ်တဲ့ စနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို မောင်းနှင်ဖို့ စီမံထားပါတယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ ရှိရင်းစွဲ memoryကိုပဲ လှည့်ကွက်တစ်ခု အနေနဲ့ ပိုပြီး ကောင်းမွန်အောင် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။- Start > Run > Regedit အဆင့်ဆင့်သွားပါ။- Registry panel ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ "HKEYLOCALMACHINE" ကို click နှိပ်ပါ။- "System" ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။- "Current control set" ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။- "control" ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- "Session Manager" ကို နှိပ်ပါ။- "Memory Managment" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ညာဘက် panel မှာ ရှိတဲ့ "Disablepasing executive" ကို Double Click နဲ့ ဖွင့်ပါ။- Large System Cache ကိုလည်း double click နဲ့ ဖွင့်ပါ။- Decimal value ကို "1″ ပြောင်းပေးပါ။- Restart ပြန်လုပ်ပါ။ Memory Performance ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်။
(၉)ဖိုင်တွေကိုလုံခြုံစေဖို့ password ပေးပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်တွေ၊ folder တွေ၊ ebook စတာတွေကို လုံခြုံစေဖို့နည်းလမ်းအမြောက်အမြား ရှိပါတယ်။ password ပေးပြီး သိမ်းဆည်းထားတာဟာအလုံအခြုံဆုံးပါပဲ။ အဲဒီလို password ပေးတဲ့အခါမှာ သိမ်းဆည်းချင်တဲ့ဖိုင်တွေကို folder တစ်ခုထဲကို အရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင်ကိုယ်မှတ်မိတဲ့ Nameပြောင်းပါ။ ပြီးရင် Windows ရဲ့ built-in zip format ကို password ပေးပါ။- Zip Software ကို install လုပ်ပြီး သုံးစွဲတာက ပိုကောင်းပါတယ်။- Win Zip Software ကို ဖွင့်ပါ။- File menu အောက်မှာရှိတဲ့ Addapassword ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။Winrar Software ကို install လုပ် ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့- ဖိုင်ကိုကလစ်ထောက်လိုက်ပြီး ချုံ့ပေးပါ...လို့ ခိုင်းပါ။- Advanced မှာ "Set password" ကို click နှိပ်ပါ။- Password line နှစ်ကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူညီရပါမယ်။
(၁၀)ဖိုင်တွေ လုံခြုံစေဖို့ ရုပ်ဖျက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်မှန်သမျှဟာ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ extension နဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ebook စာအုပ်တွေဆိုရင် (.pdf)၊ စာစီစာရိုက် ဆော့ဖဲဝဲpagemaker ဆိုရင် (.pmd)၊ Photoshop ဆိုရင် (.psd) (.jpg) စတဲ့ အဆုံးသတ်extension တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ extension တွေကို ဖော်ထားလို့ ရသလိုဖျောက်ထားလို့လည်းရပါတယ်။- ပထမဆုံး My Computer ကိုကလစ်နှိပ်ပြီး အထဲကို ၀င်ပါ။- Folder options ကို သွားပါ။ (Tools အောက်မှာ ရှိပါတယ်။)- အဲဒီက "File Types" ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။ (အဲဒီအခါမှာ ဖိုင်ရဲ့ extensionတွေ တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။- အခု ဖုံးကွယ်ထားမယ့် ဖိုင်တစ်ခုကို extension ပြောင်းပေးပါ။ ဥပမာကိုယ်က(.pmd)နဲ့ စာရိုက်ထားတဲ့ page တစ်ခုကို ဖျောက်ထားချင်ရင် အဲဒီ (.pmd)နေရာမှာ (.pdf) စသည်ဖြင့် ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါ။- ပြီးရင် extension ဖော်ထုတ်ထားတာကို ပြန်ပြီး ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါ။- အဲဒီအခါမှာ ကိုယ့်ဖိုင်ဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ မမှတ်မိ နိုင်တော့တဲ့ဖိုင်အမျိုးအစား တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
(၁၁)ပရိုဂရမ်ရဲ့ အမြန်နှုန်းတွေကို မြှင့်တင်ပါ်။
Screen ရဲ့ အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ 'taskbar' ကို Right click လုပ်ပါ။- ပေါ်လာတဲ့ box ထဲက 'Task Manager' ရွေးပါ။- 'Task Manager' ထဲကမှ 'process tab' ကို ရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ့် ပီစီထဲမှာရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ၊ browser တွေ ပေါ်ထွက် လာပါလိမ့်မယ်။- ကိုယ် မကြာခဏ သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်ပေါ်မှာ "Right Click" နှိပ်ပါ။- 'pirority' ကို High လုပ်လိုက်ပါ။- ကိုယ်သုံးစွဲတဲ့ ပရိုဂရမ်ဟာ သိသိသာသာ အမြန်နှုန်း မြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
Hibernate ကို ကွန်ပျူတာ သမားတွေ အသိများပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာကိုယ်သုံးစွဲထားခဲ့တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေအတိုင်း ပြန်ပေါ်ထွက်လာအောင်စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် memory ကို အရမ်းစားပြီး hard disk မှာလည်းမတရား နေရာယူလွန်းပါတယ်။- Control Panel ကိုဖွင့်ပါ။- Power Options ကို click နှိပ်ပါ။- Hibernate ကို ရွေးချယ်ပါ။- 'Enable hibernation' ကို 'Uncheek' ပြန်လုပ်ပါ။ (ခွင့်မပြုဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါ။)
(၁၃)Memory နည်းပါးနေတဲ့ အခါ
အမြဲလို ကြုံရဘူးပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲ နှစ်ခုလောက် အပြိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ'Memory Inerupt' ဆိုပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ကို ပိတ်သွားတာမျိုး ရှိသူတွေအတွက်လျှော့ချသင့်တဲ့ ပုံစံတွေ ရှိပါတယ်။ XP မှာ အသစ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ featureအသစ်ဟာ momery ကို အလွန် သုံးစွဲသလို "Thames" တွေကလည်း memory ကိုသုံးစွဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် Style XP လို "Thames" တွေကို memoryမြင့်မြင့်မားမား မရှိဘဲနဲ့ install မလုပ်ပါနဲ့။ Window ရဲ့ ဂန္တ၀င်ပုံစံဟာ memory ကို ချွေတာရာရောက်ပြီး အလုပ် များများရှိတဲ့ လူတွေအဖို့သင့်တော်ပါတယ်။- Control Panel > System- Advanced tab ရွေးချယ်ပါ။- 'Performance' မှာ 'setting' ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ setting ကိုကလစ်နှိပ်ပြီး 'Adjust for best performance' ကို ရွေးချယ်ပါ။နောက်တစ်နည်းနဲ့ Start Menu ကို ဂန္တ၀င် ပုံစံပြောင်းလို့ ရသေးပေမယ့်အခုနည်းက OS ကနေ အလိုအလျှေက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အတွက်ကောင်းပါတယ်။
(၁၄)Automatic update ကို ပိတ်သင့်ပါသလား။
အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပီစီတွေ အဖို့တော့ Automatic update ကိုပိတ်ထားတာဟာ အဆိုးရော အကောင်းရော ဖြစ်စေပါတယ်။ အဆိုးကတော့ browser မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ 'add-ons' လို update တွေမရနိုင် တော့ပါ။ အကောင်းဘက်ကတော့ memory ကို ပိုမို များပြားစွာ သုံးစွဲစေပြီး XP ကိုပိုမြန်စေပါတယ်။- Control Panel > System- Automatic updating ကို Turn Off လုပ်ပေးပါ။
(၁၅)ပရိုဂရမ်တွေကို Shortcuts တွေ တည်ဆောက်ထားပါ။- Desktop မှာ New Floder ဖန်တီးပြီး 'Application' လို့ အမည်ပေးပါ။- ပြီးရင် ပရိုဂရမ် တွေရဲ့ Shortcuts တွေ မှန်သမျှ ထည့်ပေးပါ။- Taskbar မှာ Right Click နှိပ်ပြီး toolbar မှာ 'New toolbar' ကို သွားပါ။- အခုန တည်ဆောက်ထားတဲ့ 'Application'(New Floder)' ဆီကို ညွှန်းပေးပါ။- ပီစီဖွင့်တိုင်းမှာ Shortcuts တွေကနေ တစ်ဆင့် အမြန်ဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်ပါမယ်။
(၁၆)'Shut-down' shortcut ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။- Desktop မှာ Right Click နှိ်ပ်ပါ။ New shotcut ကို ဖန်တီးပါ။- နာမည်မှာ 'shutdown-s-to' လို့ အမည်ပေးပါ။- ပြီးရင် properties ကို သွားပါ။ Target နေရာမှာ"C:/Windows/system32/shutdown.exe"ကို ရွေးပေးပါ။ (XP.SP2သမားတွေအတွက်တော့ အလွယ်တကူနဲ့ C > Windows > System32 > "shutdown icon"အထိ သွားပြီး shutcut ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။)
(၁၇)Keyboard shotcut တွေကိုသုံးပါ။
Ctrl+A ဆိုတာ Select All ၊ Ctrl+C ဆိုတာ Copy ၊ Ctrl+V ဆိုတာ Pasteအဲဒီလိုိမျိုး မြန်ဆန်စေတဲ့ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်း နည်းလေးတွေကို သုံးစွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(၁၈)Fonts တွေကို ခဏ ဖယ်ထုတ်ထားပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တချို့  Fonts တွေဟာ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ စာစီစာရိုက်သမားတစ်ယောက်၊ Web designer တစ်ယောက်မဟုတ်ရင် မလိုအပ်တဲ့ font တွေကိုအပြီးတိုင် ဖယ်ထုတ်ထားလို့ ရပါတယ်။ Photoshop လို ပရိုဂရမ်မျိုးဟာဖွင့်ချိန် အရမ်းကြာမြင့်တာဟာ သူ့ရဲ့ library ထဲကိုအသင့်သုံးပစ္စည်းတွေကို ခေါ်ယူနေတာကြောင့်ပါ။ အဲဒီ လိုမျိုးပဲတခြားပရိုဂရမ်ေ်တွဟာ ကြာနေတတ်တာဟာလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပြီင်္းအဲဒီထဲက အကြောင်းတစ်ခုက 'Fonts' တွေကို loading လုပ်နေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။- Control Panel > Fonts ကို ဖွင့်ပါ။- Folder အသစ်တစ်ခု ဆောက်ပါ။ အသုံးမလိုတဲ့ Fonts တွေကို သီးသန့် ပေါင်းစုထားပြီး၊ control panel ကနေ ခွဲထုတ်နေရာ ရွှေ့  ပစ်လိုက်ပါ။- ဒါဟာ ပရိုဂရမ်တွေကို မြန်ဆန်စေတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက် တစ်ခုပါပဲ။
(၁၉)Font အရွယ်အစား ပြောင်းလဲ ကြည့်နိုင်ရန်
အင်တာနက် သုံးစွဲ နေတဲ့ အချိန်မှုာ Image ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာလုံးတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခြားနေရာ မျိုးစုံက အက္ခရာတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပိုမိုသဲကွဲစွာ မြင်နိုင်ဖို့ နည်းရှိပါတယ်။- Ctrl ကို ဖိထားရင်း keyboard အပေါ်တန်းက "+" ကို နှိပ်ပါ။ နှိပ်လေလေfont နဲ့ webpage စာမျက်နှာ ကြီးလာလေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ ကတော့ 'Ctrl' နဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာကို တွဲဖက်အသုံးပြုပါ။
(၂၀)Shift + Delete ကို သတိထားပါ။
ရိုးရိုး Delete ဟာ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပေမယ့် အမှိုက်ပုံးထဲမှာကိုယ်စားကျန်ပါသေးတယ်။ Shift Key ကို သတိထားပြီး Delete ခလုတ်ကိုနှိပ်ချလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အပြီးတိုင် ဖျက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ 'Shift + Del' ကို သတိထားပြီးသုံးစွဲပါ။
(၂၁)Error report ကို ပယ်ဖျက်ပါ။
ပရိုဂရမ်တွေ မျိုးစုံ ဖွင့်နေရင်း တစ်ခါတစ်လေမှာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုခုဟာကြာမြင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ hang မသွားခင်မှာ windows ရဲ့ 'Error report'box တက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဖျောက်ထားပစ်ပါ။- Control Panel > System- ပြီးရင် Advanced ကို click နှိပ်ပါ။အဲဒီထဲကမှ 'Error Reporting'Disable ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ အတွက်ဆိုရင် 'Open-with' ဟာ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ windowmedia player ကို လက်မခံတဲ့ file extension တွေကို open-with နဲ့ဖွင့်လှစ်ရပါမယ်။ (အရင်ဆုံး player တချို့ ကိုတော့ install လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။)- ဖွင့်ချင်တဲ့ ဖိုင်တစ်ခုက်ို 'Right Click' ထောက်ပြီး 'open with' ကိုရွေးချယ်ပါ။- 'Browser' လုပ်လိုက်ရင် ပရိုဂရမ်တွေ အစီအရီ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကြိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ဖွင့်လှစ် နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျှဖွင့်ကြည့်လို့ မရဘူးထင်တဲ့ Note pad ပုံစံ ပရိုဂရမ်တွေကို word pad နဲ့ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။
(၂၃)Open-with ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်။
Photoshop မှာ (.psd) ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ပိုင် extension တွေက လွှဲလို့တခြားပုံရိပ်တွေကို ဖွင့်ကြည့်ချင်ရင် 'open-with' ကပိုပြီးမြန်ဆန်ပါတယ်။Open-with ကနေ 'Image Viewer' ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
(၂၄)Filmstrip နဲ့ ရုပ်ရှင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပုံရိပ်တွေ အားလုံးကို floder ထဲမှာ တစ်စု တစ်စည်းတည်းထားလိုက်ပါ။ ဓါတ်ပုံတွေ အားလုံးကို ရုပ်ရှင် တစ်ခုကို ကြည့်နေရသလိုမျိုးစီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်။- Floder ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။- ပြီးရင် Menu bar ထဲက 'View' မှာ Filmstrip ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။- Ctrl Key ကို ကိုင်ထားပြီး လိုအပ်သလို အကွက်ရွှေ့ လို့ ရပါတယ်။
(၂၅)IE ရဲ့ homepage ကို Blank လုပ်ထားပါ။
IE ကို ဖွင့်ရာမှာ တစ်ခါတလေ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့ default home page "msn.com" ဟာ ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကိုကြာမြင့်လွန်း တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ IE ကို ဖွင့်လိုက်စဉ်တိုင်းမှာ အဖြူထည်စာမျက်နှာ ဖြစ်နေတာဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် စေပါတယ်။- IE ကို ဖွင့်ပါ။- Tools ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ General အောက်မှာ ရှိတဲ့ address box မှာ userblank ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Apply ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ OK ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
(၂၆)Domain တွေကို key နဲ့ သုံးပါ။- www. google.com ကို သွားဖို့ အတွက် အရှည်ကြီး ရိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။- google ကို ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Ctrl key ကုိင်ထားပြီး Enter ခေါက်ပါ။အဲဒီလို shot-cuts တွေကို လေ့လာရင်း သုံးစွဲရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။
(၂၇)'Animated dog' ဟာ လေးလံပါတယ်။ ပယ်ဖျက်ထားပါ။Search box ဟာ အလွန်နှေးပါတယ်။ စက်ကို crash ဖြစ်သွား စေမတတ် ပါဘဲ။ အဲဒီခွေးကလေးကို ပယ်ဖျက်ထားပါ။- Search window ကို ဖွင့်ပါ။- Change preferences ကို click လုပ်ပါ။- 'Without an animated screen character' ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Animated object မရှိတော့တဲ့ အတွက် Search box ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် လာပါလိမ့်မယ်။
(၂၈)Network အတွင်းလေ့လာ ကြည့်ခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ network ဧရိယာ များမှာ ဘယ်သူတွေ ရှိနေသလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရှုချင်ရင်My Network places ကနေ ကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။ ပီစီတစ်လုံးကနေ နောက်တစ်လုံးဆီကို access လုပ်ဖို့ ကို တော့ admin ခွင့်ပြုချက် ဒါမှမဟုတ် passwordရယူရပါမယ်။ My Network places မှာ 'view word group computer'ကိုရွေးလိုက်။ အဆက်အသွယ် တွေ အကုန်လုံးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
(၂၉)MP3 သီချင်းတွေကို ကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။- Control panel > Taslbar and Start Menu ကို ရွေးချယ်ပါ။- Start Menu ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Customize ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Advanced tab ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- My Music ကို ရွေးချယ်ပါ။
(၃၀)Print Screen သို့မဟုတ် Capture ဖမ်းယူခြင်း
ကွန်ပျူတာပေါ်က မြင်းကွင်းတစ်ခုခုကို ပုံရိပ်အနေနဲ့ ကူးယူပြီးကိုယ့်အတွက် ပြန်လည်၍ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။- လိုချင်တဲ့ image ဒါမှမဟုတ် webpage ကို ဖွင့်ပါ။- Keyboard က 'print screen preview' ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဖွင့်ထားတဲ့ပုံရိပ် အနည်းငယ်သာ လိုချင်ရင် Alt နဲ့ တွဲနှိပ်ပါ။)- ပြီးရင် Start > Run box မှာ 'mspaint'ဆိုပြီး စာရိုက်ပါ။ (ရိုးရိုးpaint program ကို ခေါ်သုံးရင်လည်း ရပါတယ်။)- paint ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ 'Ctrl+V' ဒါမှမဟုတ် 'File menu' အောက်က 'paste'ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဤ paint နေရာမှာ အခြား Clipboard ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတည်းဖြတ် ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ photoshop corel draw စတာတွေ သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။)
(၃၁)Screen Saver ကို Slide Show လုပ်နိုင်ပါတယ်။- Control Panel > display- Display properies box ကျလာရင် 'screen saver tab' ကို ရွေးချယ်ပါ။- နောက်ဆိုရင် Screen Saver ဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ပြသလိုမျိုး ပုံရိပ်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးနိူင်အောင် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။- (My Picture folder ထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Image တွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ထားရပါမယ်။ Slide Show မှာ ပုံရိပ်တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုအကြားကြာမြင့်ချိန်က်ို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။)
(၃၂)Pop-up တွေကို လက်မခံပါနဲ့။
Firefox browser မှာ pop-up blocker ဆိုပြီး လုံခြုံရေး tool ပါဝင်တဲ့အပြင် add-ons တွေနဲ့ အထူး ပိတ်ပင် တားဆီးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ IEရဲ့နောက်ဆုံးထွက် version7.0 ကို install လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ pop-upပြဿနာဟာ ၇၀% လျှော့ကျ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် browser မှန်သမျှရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် version ကို ရအောင် ယူထားပါ။
(၃၃)Toolbar ပြုပြင်ခြင်း- firefox မှာ Menubar ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပါ။- အဲဒီထဲက ပေါ်လာတဲ့ customize bar ထဲကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ 'icon' တွေကိုပေါင်းထည့် ပေးပါ။
IE အတွက်ကတော့- IE ကို ဖွင့်ပါ။- View > toolbar > customize- အဲဒီအထဲကမှ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင် ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ လိုသလို အသုံးချနိုင်တဲ့ icon တွေ အဆင်သင့်မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရှိနေမှာပါ။
(၃၄)Private data ကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။- IE ကိုဖွင့်ပါ။ Tools Menu မှာ ရှိတဲံ့ internet options ကနေ ClearHistory ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ 'Cache' ကိုရှင်းပါ။ ပိုပြီး အန္တရာယ်ကင်းစေချင်ရင် 'Cookies' တွေကို ရှင်းပါ။Firefox ကို ဖွင့်ပါ။ "Options" ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Privacy ကို ကလစ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ box ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ "private data"တွေ့ရပါမယ်။ "Setting" ကို ၀င်ပြီး အမှန်ခြစ်တွေ ပေးထားပါ။ OK နှိပ်ပြီးပြန်ထွက်ပါ။ "Always Clear my private data when I close firefox" ရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Cyber cafe မှာ သုံးစွဲဖို့ သင့်တော်စေတဲ့ toolတစ်ခုပါ။
(၃၅)Entry တွေကို ရှင်းလင်းပါ။- Start > Run- Regedit လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။- HKEY_LOCAL_MACHINE ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Software ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Microsoft ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Windows ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Current Version ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- Uninstall ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ်။အဲဒီထဲမှာ ကိုယ် uninstallလုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းက အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် မပျက်ခဲ့တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲအကြွင်းအကျန်နဲ့ အစအန တွေကို ရှင်းလင်း ထုတ်ပါ။- Restart ပြန်လုပ်ပါ။
(၃၆)Mouse ကို ချောမွေ့ စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် Mouse ရဲ့ default ဆက်တင်ဟာ ပြုပြင်စရာ မလိုအောင်ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ချင်သေးတယ် ဆိုရင်–- Control Panel > System- Hardware ကို ရွေးချယ်ပါ။- Device Manager ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- 'Mice and other pointing serices ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ mouse ကိုright click နှိပ်ပြီး properties ကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
(၃၇)Restore point ကို ဖျက်ပစ်ပါ။
ကွန်ပျူတာရဲ့ စနစ်မှုာ တစ်ခုခု အမှားအယွင်း ဖြစ်နေခဲ့ရင် အရင်အတိုင်းအခြေအနေ ကောင်းလေးကို ပြန်လည် ရရှိစေနိုင်ဖို့ System Restore ဆိုတာထားရှိပါတယ်။ Memory ကိုရော၊ Hard disk နေရာလွတ် များများကိုရောလိုချင်တယ် ဆိုရင် အရင် restore point အဟောင်းတွေကို ဖျက်ပစ်ရပါမယ်။- Start > All Programs > Accessories > System tools > Disk Clean up >More Options အထိ ဆက်တိုက် သွားပါ။- အဲဒီ More Options မှာရှိတဲ့ restore point အဟောင်းတွေကို delete လုပ်ပစ်ပေးပါ။
(၃၈)တစ်ပတ်တစ်ခါ defragment လုပ်ပါ။- Start > All Programs > Accessories > System tools >Disk Defragmenterကို ရွေးချယ်ပါ။- Analyzing လုပ်တာနဲ့ Defragment လုပ်တာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နာရီဝက်၊တစ်နာရီလောက် အချိန် ပေးရပါမယ်။ ဒီ tool ဟာ window နဲ့ 'built-in' toolဖြစ်ပြီး System မှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ အမှိုက် အစအန တွေကိုအထိုက်အလျှောက် ဖယ်ရှား ပေးတဲ့အတွက် သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။
(၃၉)'Virtual memory' တည်ဆောက်ခြင်းဟာလည်း စနစ်ကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။
ပီစီရဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သုံးစွဲနိုင်စေဖို့'Virtual memory' တည်ဆောက် နိုင်ပါတယ်။- My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး properties ကို ရွေးချယ်ပါ။- ကျလာတဲ့ box ထဲမှာ Advanced ကို ထပ်မံ ရွေပေးပါ။- 'Performance' မှာရှိတဲ့ 'Settings' ကိုရွေးချယ်ပါ။- Change icon ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။- ပြီးရင် "customize" box ကို 'on' ပြီးတဲ့ အခါမှာ C.D.E ရှိတဲ့ driveတစ်ခုချင်း စီကို လိုသလောက် virtual memory ထပ်မံ တိုးဖြည့်ပေးထားလို့ရပါတယ်။ ပြီးရင် set command ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
(၄၀)မြန်မြန်ဆန်ဆန် Lock လုပ်နည်း
'Ctrl + Alt + Del' ကို တွဲဖက်နှိပ်ရင် 'Task Manger' ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအထဲကမှ "Log-Off" ကို ရွေးချယ်ပြီး အမြန် Lock လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီထက် ကောင်းတဲ့ နည်းကတော့-- Kkeyboard က windows Logo Key လေးကို ဖိထားပါ။ 'L' ကို နှိပ်ပါ။- Shutdown icon ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို လိုအပ်သလို ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ Log-on buttom ကလေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
(NOTE PAD တွင် DATE AND TIME ထည့်ခြင်း)
(၁) .LOG ဟု NOTEPAD တွင် ရိုက်ထည့်ပါ။(၂) .LOG EXTENSION ဖြင့် NOTEPAD ကိုသိမ်းပါ။(၃) DATE AND TIME ကိုမြင်တွေ့ရမည်။
CTRL +ALT+DEL နှိပ်၍ TASK MANANGER ကိုခေါ်တင်ပါ။APPLICATION TAB မှ ရပ်နေသော PROGRAM များကိုEND TASK လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
(၁) RUN BOX >>> REGEDIT ကိုရိုက်ပါ။(၂) HKEY_CURRENT_USER >>> CONTROL PANEL >>> DESKTOP သို့အစဉ်တိုင်းသွားပါ။(၃) AUTO END TASKS မှာ RIGHT CLICK နှိပ်၍ MODIFY ကိုရွေးပါ။(၄) VALUE0ကို 1 ပြောင်းပါ။
SHUT DOWN ကို မြန်မြန်ကျစေလိုလျှင်
(၁) RUN BOX >>> REGEDIT ဟုရိုက်ပါ။
(၂) HKEY_LOCAL_MACHINE သို့ဝင်၍SYSTEM >>> CURRENT CONTROL SET >>> CONTROL သို့အစဉ်တိုင်းဝင်ပါ။
(၃) ညာဘက်အခြမ်းက WAIT TO KISS SERVICE TIMEOUT ကို DOUBLE CLICK ၍တန်ဖိုး ၂၀၀၀၀ (၂၀စက္ကန့်) ကို ၅၀၀၀ ထိလျှော့ချပစ်လိုက်ပါ။
မိမိတွင် GMAIL ACCOUNT တစ်ခုထက်မက ရှိနေပြီးGOOGLE TALK ကို USER NAME တစ်ခုစီဖြင့်တစ်ခုထက်မက ဖွင့်၍ အသုံးပြုလိုပါလျှင်
(၁) RIGHT CLICK ON GOOGLE TALK >>> PROPERTIES ကိုဝင်၍SHORTCUT TAB မှ TARGET ကိုရှာပါ။
(၂) TARGET တွင် နောက်ဆုံးကိုသွားပြီးSPACE ခြား၍ /nomutex ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဂျီတော့တွင် မိမိအား block ထားသလားစမ်းသပ်လိုပါက၊သံသယရှိသူအား send voicemail ပို့ကြည့်ပါ။
အသံပျက်ကျသွားလျှင် block ထားသည်။တူတူတူ ဆိုပြီးစကားသံကြားရလျှင် block မထားပါ။
key logger ရန်မှကာကွယ်ရန်
key logger ရန်မှကာကွယ်ရန်အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပါ။
(၁) (ctrl+alt+del) ဖြင့် task mananger ခေါ်တင်ပါ။(၂) process tab ကိုသွား၍ msds.exe ကိုရှာပါ။(၃) ၄င်းကိုကလစ်ပြီး end process လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
အွန်လိုင်းမှာ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းတိုင်းတာလိုလျှင်အောက်ပါလင့်၂ခုတွင် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
(၁) RUN >>> REGEDIT ကိုခေါ်ပါ။(၂) HKEY_LOCAL_MACHINE >>> SYSTEM >>>CURRENT CONTROL SET>>>CONTROLကိုရောက်အောင်သွားပါ။(၃) RIGHT CLICK >>> NEW >>> KEY ပြုလုပ်ပါ။(၄) KEY NAME ကို StorageDevicePolicies ဟုပေးပါ။(၅) USB အသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုလျှင် KEY VALUE ကို 1 ဟုရိုက်ပါ။အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုလျှင်0ဟုရိုက်ပါ။
(၂) HKEY CURRENT USER >>> SOFTWARE MICROSOFT >>>MICROSOFT >>> WINDOWS >>> CURRENT VERSION >>>POLICIES >>> EXPLORER ရောက်အောင်သွားပါ။
(၃) ညာဘက်အခြမ်းမှာ RIGHT CLICK မှ NEW >>> DWORD VALUEလိုက်ပါ။
(၄) NAME = NoviewcontextmenuDword value = 1
(၅) restart လုပ်ပါ။
(၁) GTALK >>> SETTING >>> CONNECTION >>> START MONITORကိုဖွင့်ထားပါ။(၂) မိမိသိလိုသောလိပ်စာတွင် SEND VOICEMAIL ပို့ပါ။IP ADDRESS ပေါ်လာပါမည်
GOOGLE SEARCH ENGINE တွင်TIME IN MYANMAR ဟုရိုက်ထည့်ပါကမြန်မာနိုင်ငံဧ။်စံတော်ချိန်ကို GOOGLE ကပြောပြနိုင်သည်။
(ထိုနည်းဖြင့် အခြားသောနိုင်ငံများကိုလည်း အစားထိုးရှာဖွေပါ။)
(၁) TASK BAR ပေါ်တွင်RIGHT CLICK ON SPEAKER ICON မှ SOUNDS ကိုသွားပါ။(သို့မဟုတ်)RUN >>> mmsys.cpl ဟုရိုက်ထည့်၍ SOUNDS ကိုသွားပါ။
(၂) SOUND TAB ထဲမှာWINDOW DEFAULT ပြုလုပ်၍ စိတ်ကြိုက်အသံရွေးပါ။
(မိမိစိတ်ကြိုက် SOUNDS ကိုတင်လျှင် .WAV အမျိုးအစားဖြစ်ရမည်။)
မိမိဧ။် GMAIL အကောင့်အာလုံးကို အကောင့်တစ်ခုတည်းမှထိုင်စစ်လိုလျှင်
(၁) SETTING >>> ACCOUNTS >>> သို့ဝင်ပါ။GET MAIL FROM OTHER ACCOUNTS >>>ADD A MAIL ACCOUNT YOU OWN မှာ ကလစ်ပါ။
(၂) USERNAME , PASSWORD ရိုက်ထည့်ပါ။SKIP INBOX မှာ အမှန်ခြစ်၍LABEL ခွဲပေးပါ။စာများသည် ထိုLABEL ထဲသို့ရောက်သွား၍INBOX တစ်ခုတည်းမှာ အီးမေးများ ရှုပ်ပွမနေတော့ပေ။
ံHidden လုပ်ထားသော ဖိုင်များကိုပြန်ဖော်ခြင်း
(၁) RUN >>> CMD ကိုခေါ်ပါ။
(၂) HIDDEN ဖိုင်လမ်းကြောင်းဆီသို့ရောက်အောင်သွားပါ။
(၃) dir/ah ဟုရိုက်လိုက်ပါ။
မိမိကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ရေဒီယိုအစီစဉ်များ ထုတ်လွှင့်လိုသူများအတွက်SAM BROADCASTER ဖြင့် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြပေးပါမည်။
အဆင့်(၁) SAM BROADCASTER ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။(registeration key ပါဝင်ပါသည်)
အဆင့်(၂) အောက်ပါလင့်တွင် register လုပ်ပေးပါ။
အဆင့်(၃) ပြီးလျှင်၎င်းအကောင့်ထဲရှိ STREAM SETTING ထဲမှ- Server IP- Server Port- Stream Password တို့ကိုမှတ်ထားပါ။
အဆင့်(၄) ဒေါင်းလုပ်ထားသော SAM BROADCASTER ကို RUN ပါ။ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း- DESKTOP B ထဲမှ ADD NEW ENCODER ကိုသွားပါ။- MP3 PRO plugin ကိုရွေးပါ။(OK)- CONVERTER TAB ထဲမှ QUALITY နှင့် FORMAT တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပါ။(OK)- SERVER DETALS TAB ထဲတွင် အဆင့်(၃)မှ သုံးခုကိုကွပ်လပ်ဖြည့်ပေးပါ။(OK)
အဆင့်(၅) နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် SAM BROADCASTER >>> DESKTOP A ထဲတွင်မိမိနှစ်သက်ရာသီချင်းများ၊အစီစဉ်များကို စိတ်တိုင်းကျစီမံ၍ ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါပြီ။
( http://cherrymyodaw-radio.blogspot.com/ သို့ဝင်၍နမူနာရှုနိုင်ပါသည်။)
(BROADCASTING RADIO WITH WINAMP)
အင်တာနက်မှတဆင့် WINAMP ဖြင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ပုံကိုအဆင့်ဆင့်ဖော်ပြပါမည်။
အဆင့် (၁) http://www.shoutcast.com/ သို့ဝင်ပါ။အဆင့် (၂) Download/Beadj သို့ဝင်ပါ။အဆင့် (၃) Winamp နှင့် Shoutcast Radio DSP plugin တို့ကိုဒေါင်းလုပ်ပါ။အဆင့် (၄) Winamp ကိုဖွင့်ပါ။ Ctr+P နှိပ်၍PLUGIN >>> DSP/EFFECT ကိုသွားပါ။SHOUTCAST SOCRCE DSP ကိုရွေးပြီး CONFIGURE လုပ်ပါ။အဆင့် (၅) SHOUTCAST SOCRCE DSP ကိုခေါ်ပါ။ OUTPUT TAB ထဲမှCONNECTION တွင် (address,port,password) ကွပ်လပ်သုံးခုကိုဖြည့်ပါ။အဆင့် (၆) ENCODER TAB ထဲမှ ENCODER TYPE တွင် MP3 ENCODER ကိုရွေးပါ။ထို့နောက်သီချင်းဖွင့်၍ရေဒီယိုလွှင့်နိုင်ပါပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ (ADDRESS,PORT,PASSWORD) သုံးခုကိုhttp://www.freestreamhosting.org/ တွင် register လုပ်၍ရယူနိုင်ပါသည်။
အင်တာနက်ကို ၂၀% မြန်အောင်လုပ်နည်း
စတင်လုပ်ရမှာကတော့....1. Start Menu--->> Click Run ကိုရွေးပါ။2. gpedit.ms c ရိုက်ပါ။3. Enter ခေါက်ပါ။4. ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Computer Configuration ကို Expand လုပ်ပါ။၅. Administrative Templates ကို Expand လုပ်ပါ။၆. Network ကို Expand လုပ်ပါ။၇. Qos Packet Scheduler ကိုရွေးပါ။၈. ပြီးလျှင် ညာဘက်ခြမ်းက Limit Reservable Bandwidth ဆိုတဲ့စာကြောင်းပေါ်မှာ double Click နှိပ်ပါ။၉. Limit Reservable Bandwidth Properties box မှာ Enable option ကိုရွေးပါ။၁၀. Bandwidth Limit [%] box မှာ 0% ကို 20 % ပြောင်းပြီး ok နှိပ်ထွက်ပါ။ဒါဆိုရင် ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်..။
Start and Shutdown မြန်အောင်လုပ်နည်း
XP မှာ start နှင့် shutdown မြန်အောင်လုပ်နည်းလေးပါ..။XP အသုံးပြုသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ဒီပိုစ့်လေးကို တင်လိုက်တာပါ...။အရင်ဆုံး start မြန်အောင်လုပ်နည်းကို ဆွေးနွေးပါ့မယ်....။ထုံးစံအတိုင်း start Run (or) win + R ကို သွားလိုက်ပါ...။Run Box တွင် regedit ကိုရိုက်ထည့်ပြီး ok ပေးလိုက်ပါ.။ပေါ်လာတဲ့ Register Editor Box မှာ အောက်မှာရေးးထားတဲ့ အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားလိုက်ပါ...။HKEY_LOCAL_MACHINE >> SYSTEM >> CurrentControlSet >> Control >> Session Manager >>Memory Management >> Prefetchparameters ဆိုတာကို double click ပေးလိုက်ပါ..။ဘေးက Box ထဲမှာ EnablePrefetcher ဆိုတာကိုလိုက်ရှာပြီး right click>> Modify >> Value data မှာ3နေရာမှာ5လို့ပြောင်းပြီး okပေးလိုက်ပါ ..။ဒါဆိုရင် start မြန်အောင် လုပ်နည်းပြီးပါပြီ...။နောက်တစ်ခု Shutdown မြန်အောင်လုပ်နည်းကို ဆွေးနွေးပါမယ်.. ။အရင်ဆုံး အပေါ်က အတိုင်းပဲ start Run (or) win + R ကို သွားလိုက်ပါ...။Run Box တွင် regedit ကိုရိုက်ထည့် ok ပေးပြီးအောက်မှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း အစဉ်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ...။HKEY_CURRENT_USER>> Control Panel >> Desktop ထိရောက်အောင်သွားပါ..ဘေးက Box မှာ AutoEndTasks ဆိုတာကိုရှာပြီး Value data မှာ 1 ပြောင်းပေးလိုက်HungAppTimeout နဲ့ WaitToKillAppTimeout နှစ်ခုလုံးကို 1000 လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ..။အရမ်းကြီးမြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ပြောင်းကြည့်ပေါ့ ကျနော်ကတော့ 1000 လို့ပဲပြောင်းထားပါတယ်..။နှစ်ခုလုံး လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါခင်ဗျာ...။တက်တာရော ကျတာပါ..မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ ..။
ွGtalk မှာ မိမိနာမည်မကျန်ခဲ့စေချင်လျှင် . ..
ကျွန်တော်တို. Gtalk သုံးတဲ့အခါမှာတော်များများကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးတာများပါတယ်။အခုတင်ပြတဲ့နည်းကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာမိမိရဲ.Gmail Addressတွေမကျန်ခဲ့စေအောင်သုံးတဲ့နည်းလေးပါ။ဒီလိုပါ။မိမိGtalk မ၀င်ခင် မိမိရဲ.ရှေကဘယ်သူတွေ Gtalk၀င်သွားလဲ၊သူတို.ရဲ. Gmail Addressတွေကဘာနာမည်လဲဆိုတာသိချင်ကြပါလိမ့်မယ်။နောက်တခုက မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ရင်လဲမိမိ Gmail Address ကိုသူများမသိအောင်ဘယ်လိုဖျက်မလဲဆိုတာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။သူများသိတော့ကို ကို invite လုပ်မှာပေါ့။အဒီတော့စက်ထဲမှာ မိမိ Gmail Addressမကျန်ခဲ့စေရန်ရည်ရွယ်ရေးသွားပါတယ်။စလုပ်လိုက်ရအောင်။
၁။ အရင်ဦးဆုံး Start ထဲက Run ကိုနှိပ်ပါ။(သို.မဟုတ်)Window+R ကိုတွဲဖိပါ။
၂။ Run Box ကျလာပါက Regedit ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။Box ကျလာပါလိမ့်မည်။
၃။ ထို Boxထဲတွင် Folder ၅ခုတွေ.ပါလိမ့်မည်။ထို Folder ၅ခုမှ ဒုတိယမြောက် HKEY_CURRENT_USER ဘေးရှိ + ကိုနှိပ်ပါ။List ကျလာပါလိမ့်မည်။
၄။ Software ရှာပါ။တွေ.ပါကSoftware ဘေးရှိ +ကိုဆက်နှိပ်ပါ။List ကျလာပါလိမ့်မည်။
၅။ Google ကိုရှာပါ။တွေ.ပါက Google ဘေးရှိ + ကိုဆက်နှိပ်ပါ။List ကျလာပါလိမ့်မည်။
၆။ Google Talk ကိုရှာပါ။တွေ.ပါက Google Talk ဘေးရှိ +ကိုနှိပ်ပါ။List ကျလာပါလိမ့်မည်။
၇။ Account နှိပ်ပါ။Gmail Address များကိုတွေ.ရပါလိမ့်မည်။အကယ်လို.မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ တယ်ဆိုရင်တော့မိမိGmail Addressနာမည်ပေါ်နေပါလိမ့်မည်။ဖျက်လိုပါက မိမိနာမည် ပေါ်တွင် Right ကလစ်နှိပ်၊Delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။Name/Type/Data တို.အောက်ကျန်ခဲ့ပါက Name အောက်ရှိ ab ပေါ်တွင် Rightကလစ်နှိပ်၊Delete ကိုနှိပ်ပေးပါ။
အခု ကျွန်တော် ပြောပြမဲ့ ပရိုဂရမ်လေးက Toucan လို့ ခေါ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖိုင်တွေကို ဝှက်စာ အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ အသုံးဝင် ပရိုဂရမ်တခုပါ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ USB drive, Memory stick, Thumb drive, MP3/MP4 playerထဲမှာ ဒီပရိုဂရမ်လေးကို ထည့်ထား လို့ရပြီး ဘယ် အင်တာနက်ကဖေးမှာ ဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ USB drive, Memory stick, Thumbdrive, MP3/MP4 player ထဲမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ၊ နှလုံးသားရေးရာ၊ ငွေကြေးကိစ္စ၊ တခြားလူ အသိမခံနိုင်တဲ့ ဘာမဆိုသိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင် ဒီပရိုဂရမ်လေးကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာ လျှို့ဝှက်ထားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
ကဲ အသုံးပြုပုံလေး နဲနဲ ပြောကြရအောင်။
ဒီပရိုဂရမ်လေးကို သုံးဖို့ အခု ဒီ post ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ Attachment ကို Download ဆွဲလိုက်ပါ..။
ဒါမှမဟုတ် http://portableapps.com/apps/utilities/toucan ကို သွားပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် download လုပ်ရင်လဲရပါတယ်။connection အပေါ်မူတည် ပြီး သင့်တော်တဲ့ နေရာ ကနေ download လုပ်ပါ။download လုပ်ပြီးရင် သင့်ရဲ့ USB drive, Memory stick, Thumb drive, MP3/MP4 player ထဲမှာ install လုပ်ရပါမယ်။install လုပ်ပြီးရင် ဘယ်ကွန်ပျူတာမှာမဆို တပ်ပြီးသုံးလို့ ရပါပြီ။USB drive, Memory stick, Thumb drive, MP3/MP4 player ကို My Computer နေ ဖွင့်ပါ။
Toucan ပရိုဂရမ်ကို ရှာပြီး ဖွင့်ပါ။ပြီးရင် အပေါ်က Tools Bar မှာ ၃ ခုမြောက် Scure ကိုရွေးပါ..။ဘယ်ဘက် ဘောက်စ်ထဲမှာ အခုကွန်ပျူတာ မှာရှိတဲ့ disk drive တွေကိုပြ နေပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ရှိရာကို ရောက်တဲ့အထိ double click ပြီးဖွင့်ပါ။တွေ့ပြီဆိုရင် ဘောက်စ် နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ + သင်္ကေတကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီဖိုင်ဟာ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ ဘောက်စ်ထဲကိုရောက်သွားမှာပါ။တဖိုင်ချင်းသာမက ဖိုဒါတခုလုံးကိုပါ ဝှက်စာ လုပ်လို့ရပါတယ်၊ ဝှက်စာကနေ ပြန်ဖော်လို့ရပါတယ်။ဖိုင်တွေကိုရွေးပြီးရင် function ဆိုတဲ့ဘောက်စ်ထဲမှာ ဝှက်စာ အဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆို Encrypt ရွေးပြီးဝှက်စာ ကနေပြန်ဖော်မယ်ဆို Decrypt ကိုရွေးပါ။ပြီးရင် အိုကေ ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Please enter your password ဆိုပြီး ဘောက်စ်တခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။password ကို ရှည်နိုင်သမျှရှည်ရှည် ပေးတာပိုကောင်းပါတယ်။ကိုယ့် password ကိုလည်း ကိုယ်ပြန်မှတ်မိပါစေ။ပြီးတာနဲ့အိုကေ ကို နှိပ်လိုက်ရင် မူရင်းဖိုင်ပျောက်သွားပြီး ဝှက်စာ ဖြစ်သွားတဲ့ဖိုင်ကိုရပါလိမ့်မယ် (ပြောင်းပြန် အနေနဲ့ ဆိုရင် ဝှက်စာဖိုင်ပျောက်သွားပြီး မူရင်းဖိုင် ပြန်ရမှာပါ)။ဝှက်စာဖိုင်ဖြစ်သွားပြီးနောက် ဘယ်အင်တာနက် ကဖေးမဆို USB drive, Memory stick, Thumb drive, MP3/MP4 player ကို သယ်သွားလို့ရပါပြီ။တဖက်သူဆီကို ပို့ရင်လဲ စိတ်ချလက်ချ ပို့လို့ရပါပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ဝှက်စာ လုပ်တဲ့ password ကိုလက်ခံရရှိသူကသိရင်ပြီးတာပါပဲ။
ွGtalk မှာ ပုံလေးတွေ Slideshow ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နည်း
ကွန်ပျူတာကို password ခံထားတတ်ကြပါတယ်...။passwordခံထားရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးထင်ရင်တော့ ဒီနည်းလေးကိုသုံးကြည့်လိုက်ပါ..။.
၁၊ window+R နှိပ်ပြီRun box ခေါ်လိုက်ပါ။
၂၊ gpedit.msc ကိုရိုက်ထည့်ပြီ ok(or)Enter နှိပ်လိုက်ပါ။
၃၊ Group Policy Object Editor ဆိုတဲ့ box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။
၄၊ အဲဒီ box ရဲ့ Local Computer Policy အောက်က User Configurationကိုသွားလိုက်ပါ။
၅၊ User Configuration ရဲ့အောက်မှ Administrative Template ဆိုတာလေးကို doubleclick ပေးပြီသူ့ရဲ့အောက်က system ဆိုတာလေးကို double click ထပ်ပေးလိုက်ပါ။
၆၊ ပြီးရင်တော့ ညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ setting ရဲ့အောက်က Ctrl +Alt +Del ဆိုတာလေးကိုdouble click ပေးပြီဝင်လိုက်ပါ။
၇၊ အပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့ Remove change password ကို double click လုပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ။
၈၊ အဲဒီမှာ Remove Change Password Properties ဆိုတဲ့ box လေးထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
၉၊ အဲဒီ box ရဲ့ setting ထဲက Enable ဆိုတာလေးကိုအမှန်ခြစ်လေးပေးပြီး apply , okပေးလိုက်ရင် သူငယ်ချင်းကွန်ပျူတာ ပိုပြီးတော့စိတ်ချရပါလိမ့်မယ်..။
Run Box နောက်ထပ်ရိုက်လို့ရမဲ့ Command တွေပါ
မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးမှာ Environment Variables လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်...။
* %allusersprofile%* ကွန်ပျုတာကို သုံးနေတဲ့သူ အားလုံးရဲ့ Profile တွေရှိနေတဲ့ နေရာကို ပြပေးပါတယ်။
* %appdata%* အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ သိမ်းထားတဲ့ နေရာပါ။
* %comspec%* Command shell တကယ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာ။
* %homedrive%* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive နေရာ။
* %homepath%* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive လမ်းကြောင်း။
* %logonserver%* လက်ရှိဝင်သုံးနေတဲ့သူရဲ့ Domain Controller
* %programfiles%* ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ နေရာ
* %systemdrive%* ၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Directory
* %systemroot%* ၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Root Directory
* %tmp% သို့မဟုတ် %temp%* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အလုပ်လုပ်လက်စ ဖိုင်တွေရှိရာနေရာ
* %username%* လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူ အမည်
* %userdomain%* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Domain အမည်
* %userprofile%* လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူရဲ့ Profile ရှိရာနေရာ
* %windir%* OS တင်ထားတဲ့ နေရာ
ကွန်ပျူတာ မှာ အသုံးပြု တဲ့ Run Command လေးတွေ...............(This is used for command in computer ) .....
NOTE: If you interest to use this command ,you must be done as likethis step.First go to the 'run',in this box you must be written'cmd'.You will see command box .In this box you write this command.Only not know computer command .................................................Try it.We will get.သုံးနည်းလေးပါ...........ပထမဆုံး"run box"ကို ဖွင့် ရမှာပါ။window key နဲ့ R ကို တွဲ နှိပ် ပါ။"Run box" ကျ လာပါ မယ်။အဲဒီ"Run box" မှာ "cmd"လို့ရိုက် ပါ။"command box"လေးကျ လာ ပါ မယ်။အဲဒီ "box" လေးမှာ ဒီ "command"တွေကို ရိုက် ပြီးသုံးကြည့် ပါ။သိ ပြီးသူများကို မရည်ရွယ်ပါဘူး..။.
1.Accessibility Control (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က access.cpl
2.Add Hardware Wizard (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က hdwwiz.cpl
3.Add/Remove Programs (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က appwiz.cpl
4.Administrative Tools(command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control admintools
5.Automatic Updates (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က wuaucpl.cpl
6.Blutetooth Transfer Wizard (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က fsquirt
7.Calculator(command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က calc
8.Certificate Manager (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က certmgr.msc
9.Character Map (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က charmap
10.Check Disk Utility (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က chkdsk
11.Clipboard Viewer (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က clipbrd
12.Command Prompt (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က cmd
13.Component Services (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က dcomcnfg
14.Computer Management (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က compmgmt .msc
15.Date and Time Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က timedate.cpl
16.DDE Shares (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ddeshare
17.Device Manager (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က devmgmt.msc
18.Direct X Control Pannel (If Installed)* (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ ကdirectx.cpl
19.Direct X Troubleshooter (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က dxdiag
20.Disk Cleanup Utility (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က cleanmgr
21.Disk Defragment (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က dfrg.msc
22.Disk Management (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က diskmgmt.msc
23.Disk Partition Manager (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က diskpart
24.Display Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control desktop
25.Display Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က desk.cpl
26.Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control color
27.Dr.Watson System Troubleshooting Utility (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က drwtsn32
28.Driver Verifier Utility (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က verifier
29.Event Viewer (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က eventvwr.msc
30.File Signature Verification Tool (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က sigverif
31.Findfast (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က findfast.cpl
32.Folders Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control folders
33.Fonts (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control fonts
34.Fonts Folder (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က fonts
35.Free Cell Card Game (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က freecell
36.Game Controllers (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က joy.cpl
37.Group Policy Editor (XP Prof) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က gpedit.msc
38.Heart Card Game (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က mshearts
39.Iexpress Wizard (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က iexpress
40.Indexing Services (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ciadv.msc
41.Internet Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က inetcpl.cpl
42.IP Configuration (Display Connection Configuration) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ipconfig/all
43.IP Configuration (Display DNS Cache Contents) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ipconfig/displaydns
44.IP Configuration(Delete DNS Cache Contents) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ipconfig/flushdns
45.IP Configuration (Release All Connections) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ipconfig/release
46.IP Configuration(Refreshes DHCP& Re-Registers DNS) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ipconfig/registerdns
47.IP Configuration(Display DHCP Class ID) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ipconfig/showclassid
49.IP Configuration(Modifies DHCP Class ID) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က spconfig/setclassid
50.ava Control Panel (If Installed) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က jpicpl32.cpl
51.Java Control Panel(If Installed) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က javaws
52.Keyboard Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control keyboard
53.Local Security Settings (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က secpol.msc
54.Local Users and Groups (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က lusrmgr.msc
55.Logs You Out of Windows (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က logoff
56.Microsoft Chat (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က winchat
57.Minesweeper Game (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က winmine
58.Mouse Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control mouse
59.Mouse Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က main.cpl
60.Network Connection (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ncpa.cpl
61.Network Setup Wizard (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က netsetup.cpl
62.Notepad (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က notepad
63.Nview Desktop Manager (If installed) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ ကnvtuicpl.cpl
64.Object Packager (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က packager
65.ODBC Data Source Administrator (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က odbccp32.cpl
66.On Screen Keyboard (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က osk
67.Opens AC3 Filter (If installed) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ac3filter.cpl
68.Password Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က password.cpl
69.Performance Monitor (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က perfmon
70.Phone and Modem Options (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က telephon.cpl
71.Power Configuration (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က powercfg.cpl
72.Printers and Faxes (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control printers
73.Printers Folder (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က printers
74.Private Character Editor (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က eudcedit
75.Quicktime(If Installed) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က QuickTime.cpl
76.Regional Settings (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က intl.cpl
77.Registry Editor (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က regedit
78.Registry Editor (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က regedit32
79.Remote Desktop (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က mstsc
80.Removable Storage (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ntmsmgr.msc
81.Removable Storage Operator Requests (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က ntmsoprq.msc
82.Resultant Set of Policy(XP Prof) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က rsop.msc
83.Scanners and Cameras (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က sticpl.cpl
84.Scheduled Tasks (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က control schedtasks
85.Security Center (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က wscui.cpl
86.Services (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က services.msc
87.Shared Folders (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က fsmgmt.msc
88.Shut Down Windows (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က shutdown
89.Sounds and Audio (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က mmsys.cpl
90.Spider Solitare Card Game (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က spider
91.SQL Client Configuration (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က cliconfg
92.System Configuration Editor (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က sysedit
93.System Configuration Utility (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က msconfig
94.System File Checker Utility (Scan Immediately) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က sfc/scannow
95.System File Checker Utility (Return to Default Setting (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က sfc/revert
96.System File Checker Utility (Purge File Cache) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က sfc/purgecache
97.System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က sfc/cachesize=x
98.System Properties (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က sysdm.cpl
99.Task Manager (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က taskmgr
100.Telnet Client (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က telnet
101.User Account Management (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က nusrmgr.cpl
102.Utility Manager (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က utilman
103.Windows Firewall (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က firewall.cpl
104.Windows Magnifier (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က magnify
105. Windows Management Infrastructure (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က wmimgmt.msc
106.Windows Update Launches (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က wupdmgr
107.Windows XP Tour Wizard (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က tourstard
108.Wordpad (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က wordpad
ှWindow အသုံးဝင် Keyboard Shortcuts များ
SHIFT+DELETE ..........(Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
CTRL while dragging an item ..........(Copy the selected item)
CTRL+SHIFT while dragging an item........... (Createashortcut to the selected item)
F2 key ..........(Rename the selected item)
CTRL+LEFT ARROW.............. (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
CTRL+DOWN ARROW ..............(Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)
CTRL+UP ARROW .................(Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
SHIFT with any of the arrow keys ..............(Select more than oneitem inawindow or on the desktop, or select text inadocument)
CTRL+A .................(Select all)
F3 key..................... (Search forafile orafolder)
ALT+ENTER .........(View the properties for the selected item)
ALT+F4 ................(Close the active item, or quit the active program)
ALT+ENTER ..........(Display the properties of the selected object)
ALT+SPACEBAR ...........(Open the shortcut menu for the active window)
CTRL+F4 ..............(Close the active document in programs that enable you to have multiple documents open simultaneously)
ALT+TAB................. (Switch between the open items)
ALT+ESC ..............(Cycle through items in the order that they had been opened)
F6 key ....................(Cycle through the screen elements inawindow or on the desktop)
F4 key ....................(Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)
SHIFT+F10 .............(Display the shortcut menu for the selected item)
ALT+SPACEBAR .........(Display the System menu for the active window)
CTRL+ESC .............(Display the Start menu).ALT+Underlined letter inamenu name ..........(Display the corresponding menu)
Underlined letter inacommand name on an open menu ...............(Perform the corresponding command)
F10 key ..........................(Activate the menu bar in the active program)
RIGHT ARROW ..............(Open the next menu to the right, or openasubmenu)
LEFT ARROW .................(Open the next menu to the left, or closeasubmenu)
F5 key ......................(Update the active window)
BACKSPACE .................(View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer)
ESC ..........................(Cancel the current task)
SHIFT when you insertaCD-ROM into the CD-ROM drive ...............(Prevent the CD-ROM from automatically playing)
CTRL+TAB ..................(Move forward through the tabs)
CTRL+SHIFT+TAB................. (Move backward through the tabs)
TAB ....................(Move forward through the options)
SHIFT+TAB .................(Move backward through the options)
ENTER ......................(Perform the command for the active option or button)
SPACEBAR .................(Select or clear the check box if the active option isacheck box)
Arrow keys .............(Selectabutton if the active option isagroup of option buttons)
F1 key .............(Display Help)
F4 key ....................(Display the items in the active list)
BACKSPACE............... (Openafolder one level up ifafolder is selected in the Save As or Open dialog box)
Windows Logo ..................(Display or hide the Start menu)
Windows Logo+BREAK................ (Display the System Properties dialog box)
Windows Logo+D..................... (Display the desktop)
Windows Logo+M ..................(Minimize all of the windows)
Windows Logo+SHIFT+M .................(Restore the minimized windows)
Windows Logo+E..................... (Open My Computer)
Windows Logo+F ..................(Search forafile orafolder)
CTRL+Windows Logo+F ..............(Search for computers)
Windows Logo+F1 ....................(Display Windows Help)
Windows Logo+ L.................. (Lock the keyboard)
Windows Logo+R ..................(Open the Run dialog box)
Windows Logo+U ..................(Open Utility Manager)
Right SHIFT for eight seconds .....................(Switch FilterKeys either on or off)
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN .........(Switch High Contrast either on or off)
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK ..............(Switch the MouseKeys either on or off)
SHIFT five times.................................. (Switch the StickyKeys either on or off)
NUM LOCK for five seconds ..................(Switch the ToggleKeys either on or off)
Windows Logo +U ....................(Open Utility Manager)
END ..........................(Display the bottom of the active window)
HOME........................ (Display the top of the active window)
NUM LOCK+Asterisk sign ....................(Display all of the subfolders that are under the selected folder)
NUM LOCK+Plus sign (+) ................(Display the contents of the selected folder)
NUM LOCK+Minus sign (-) ..................(Collapse the selected folder)
LEFT ARROW ....................(Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)
RIGHT ARROW................... (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)
RIGHT ARROW ....................(Move to the right or to the beginning of the next line)
LEFT ARROW ....................(Move to the left or to the end of the previous line)
UP ARROW ........................(Move up one row)
DOWN ARROW .................(Move down one row)
PAGE DOWN ......................(Move down one screen atatime)
HOME...................................(Move to the beginning of the line)
END .....................................(Move to the end of the line)
CTRL+HOME ....................(Move to the first character)
CTRL+END.......................... (Move to the last character)
SPACEBAR ........................(Switch between Enlarged and Normal mode whenacharacter is selected)
CTRL+O ................(Openasaved console)
CTRL+N ................(Openanew console)
CTRL+S................ (Save the open console)
CTRL+M ...............(Add or removeaconsole item)
CTRL+W ...............(Openanew window)
F5 key..................(Update the content of all console windows)
ALT+SPACEBAR ............(Display the MMC window menu)
ALT+F4 .................(Close the console)
ALT+A .................(Display the Action menu)
ALT+V .................(Display the View menu)
ALT+F.................. (Display the File menu)
ALT+O .................(Display the Favorites menu)
CTRL+P ................(Print the current page or active pane)
ALT+Minus sign (-).................... (Display the window menu for the active console window)
SHIFT+F10 ...........................(Display the Action shortcut menu for the selected item)
F1 key .............................(Open the Help topic, if any, for the selected item)
F5 key ............................(Update the content of all console windows)
CTRL+F10 .....................(Maximize the active console window)
CTRL+F5 ........................(Restore the active console window)
ALT+ENTER ..................(Display the Properties dialog box, if any, for the selected item)
F2 key .............................(Rename the selected item)
CTRL+F4 ....................(Close the active console window. When aconsole has only one console window, this shortcut closes the console)
CTRL+ALT+END ....................(Open the m*cro$oft Windows NT Security dialog box)
ALT+PAGE UP ...................(Switch between programs from left to right)
ALT+PAGE DOWN ......................(Switch between programs from right to left)
ALT+INSERT .....................(Cycle through the programs in most recently used order)
ALT+HOME ....................(Display the Start menu)
CTRL+ALT+BREAK ................(Switch the client computer betweenawindow andafull screen)
ALT+DELETE .....................(Display the Windows menu)
CTRL+ALT+Minus sign (-) ..........................(Placeasnapshot ofthe active window in the client on the Terminal server clipboard andprovide the same functionality as pressing PRINT SCREEN onalocalcomputer.)
CTRL+ALT+Plus sign (+) ........................(Placeasnapshot of theentire client window area on the Terminal server clipboard and providethe same functionality as pressing ALT+PRINT SCREEN onalocalcomputer.)
CTRL+B .....................(Open the Organize Favorites dialog box)
CTRL+E........................ (Open the Search bar)
CTRL+F .......................(Start the Find utility)
CTRL+H ........................(Open the History bar)
CTRL+I ..........................(Open the Favorites bar)
CTRL+L .......................(Open the Open dialog box)
CTRL+N...................... (Start another instance of the browser with the same Web address)
CTRL+O .....................(Open the Open dialog box, the same as CTRL+L)
CTRL+P ......................(Open the Print dialog box)
CTRL+R .......................(Update the current Web page)
CTRL+W ........................(Close the current window)
(1) Indexing Services ကို ပိတ်ပစ်ပါ။
ဒီဆားဗစ်က ကျနော်တို့ရဲ့စက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုလ်ဒါတွေ၊ ဖိုင်တွေရဲ့စာရင်းကိုစနစ်တကျ စုစည်းပေးတဲ့ ဆားဗစ်တစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုရှာတဲ့အခါတိုင်း စက်ထဲမှာရှိသမျှ ဖိုင်တိုင်းကိုလိုက်စစ်စရာမလိုဘဲတည်ဆောက်ပြီးသား index list မှာရှာခြင်းအားဖြင့် မြန်မြန်ရှာတွေ့စေပါတယ်။ဆိုးတာက သူက system resourse တော်တော်များများကို သုံးတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ဖိုင်(သို့)ဖိုလ်ဒါတစ်ခုခုကို ပြင်ဆင်တိုင်း သူကအမြဲနောက်ကွယ်ကနေ indexingand updating လုပ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဖိုင်တွေကို အမြဲရှာဖွေမနေရင်၊မှတ်မိနေရင်(ဦးနှောက်ကောင်းရင်ပေါ့ဗျာ) ဒီဆားဗစ်မလိုပါဘူး။ ရံဖန်ရံခါရှာဖွေဖို့လိုအပ်ရင်တောင် ဒီဆားဗစ်ကို ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ သူ့ကိုအပြီuးninstall လုပ်ချင်ရင်....
၁. Start ကို သွားပါ။၂. Setting ကိုရွေးပါ။၃. Control Panel ကိုရွေးပါ။(ဒါမှမဟုတ် Windows key + R နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Run box ထဲမှာ control လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ရင်လည်းရပါတယ်)၄. Add or Remove Programs ကို ဖွင့်ပါ။၅. Add/Remove Windows Components ကို ရွေးပါ။၆. Indexing Services check box က အမှန်ခြစ်ကို ရှင်းပစ်ပါ။ (အမယ်လေး...ဘာသာပြန်ရတာ မလွယ်ပါလား။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာကမှမျက်စိထဲမြင်လိမ့်ဦးမယ်ထင်တယ်။ )၇. Next ကိုရွေးပါ။
(2) OPTIMISE DISPLAY SETTINGS
Windows Xp ရဲ့ အမြင်ပိုင်းဟာ အရင်ဝင်းဒိုးစ်တွေထက်စာရင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပေမယ့် "ပေါ့စေလိုလို့ကြောင်ဆေးထိုး၊ဆေးအတွက်ကြောင့်လေး"ဆိုသလို အဲဒီအခြယ်အသတွေကြောင့်ပဲစက်ကိုနှေးကွေးစေပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းကြောင့် စက်ကိုမနှေးကွေးစေဖို့...
1. Go to Start2. Click Settings3. Click Control Panel4. Click System5. Click Advanced tab6. In the Performance tab click Settings7. Leave only the following ticked:- Show shadows under menus- Show shadows under mouse pointer- Show translucent selection rectangle- Use drop shadows for icons labels on the desktop- Use visual styles on windows and buttons
ဟဲ..ဟဲ.. အခုမှပဲ အဆင်ပြေတော့တယ်။ (ကူးချလို့ရတာကိုး)
(3) SPEEDUP FOLDER BROWSING
Windows XP မှာ ကျနော်တို့ My Computer ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Windows Explorerပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို ဖွင့်လိုက်တိုင်း Windows က Network files andPrinters တွေကို အလိုအလျောက် ရှာပါတယ်။ Explorer ဖွင့်လိုက်ရင်မှန်ဘီလူးပုံစံနဲ့ ဖိုင်ရှာနေတဲ့ပုံစံကို တစ်ခါတစ်လေမြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ Search ကိုပိတ်ပြီး မြန်မြန် browseလုပ်နိုင်စေဖို့.....
1. Open My Computer2. Click on Tools menu3. Click on Folder Options4. Click on the View tab.5. Uncheck the Automatically search for network folders and printers check box6. Click Apply7. Click Ok8. Reboot your computer
(4) OPTIMISE YOUR PAGEFILE
ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါ Application တွေအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်ပြီးသုံးလို့၊ ဒါမှမဟုတ် စက်ကိုသုံးတာကြာလာလို့ memoryမလောက်မငဖြစ်လာတဲ့အခါ Windows ကနေ Hard disk ရဲ့ Partition တစ်ခုခုမှာPagefile လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတစ်နေရာကို memoryအစားထိုးအသုံးပြုပါတယ်။ (Pagefile ကို Virtual Memory လို့လဲခေါ်ပါတယ်။)Windows က သူလိုရင်လိုသလောက် pagefile အရွယ်အစားကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်သုံးသွားပါတယ်။ ကျနော်တို့က Pagefile အရွယ်အစားကိုအသေသတ်မှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Windows ရဲ့ ၀န်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ Pagefile အရွယ်အစားသတ်မှတ်ဖို့......
1. Right click on My Computer and select Properties2. Select the Advanced tab3. Under Performance choose the Settings button4. Select the Advanced tab again and under Virtual Memory select Change5. Highlight the drive containing your page file and make the initialSize of the file the same as the Maximum Size of the file. (pagefileရဲ့ အစပမာဏနဲ့ အဆုံးပမာဏကို အတူတူထားပေးရပါမယ်။)
ဒီနေရာမှာ Pagefile ရဲ့ အရွယ်အစားကို ဘယ်လောက်ထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့Windows က Maximum အနေနဲ့ ကျနော်တို့စက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ memory sizeရဲ့တစ်ဆခွဲ (1.5X)ကို ပုံသေထားပါတယ်။ ဥပမာ ကျနော်တို့စက်မှာ memory 512 MBဆင်ထားရင် Windows က အမြင့်ဆုံး 768 MB ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်ဒါက 512 MBထက်မင်မိုရီနည်းတဲ့ စက်တွေအတွက်ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုရရင် ဒီစက်တွေအတွက်initial size = 768 Mb, maximum size = 768 Mb ထားပေးရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။memory 512 Mb နဲ့အထက် စက်တွေမှာတော့ Pagefile အရွယ်အစားကိုစက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ memory size အတိုင်း ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ.. memory1 Gb ရှိတဲ့စက်မှာဆိုရင် initial size = 1024 Mb, maximum size = 1024 Mbထားပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Set ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။(5) REMOVE FONTS FOR SPEED
ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ အဖိုးတန် system resourses တွေကိုယူသုံးနေတဲ့အရာတွေထဲမှာ ဖောင့်ဖိုင်တွေဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။အကောင်းဆုံးက ကျနော်တို့လိုသလောက်၊ သုံးသလောက်မရှိမဖြစ်ဖောင့်အနည်းငယ်ကိုသာ သွင်းထားတာပါပဲ။ မလိုအပ်တဲ့ဖောင့်တွေကိုuninstall လုပ်ဖို့......
1. Open Control Panel2. Open Fonts folder3. Move fonts you don't need toatemporary directory (e.g.C:FONTBKUP?) just in case you need or want to bringafew of them back.The more fonts you uninstall, the more system resources you will gain.
(6) DISABLE UNNECESSARY SERVICES
Windows Xp စနစ်တွေဟာ လူပေါင်းစုံ၊ အလွှာပေါင်းစုံအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေဖို့ servicesမျိုးစုံကိုပြွတ်သိပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့မှာကျနော်တို့မလိုအပ်တဲ့ အလုပ်တွေအတွက် system ရဲ့resource တွေကိုဖြုန်းတီးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ (ဥပမာ.. ကျနော့်အိမ်ကစက်မှာ ဘာအင်တာနက်၊ဘာနက်ဝက်မှမရှိတဲ့အတွက် ကျနော့်အတွက်တော့ windows ရဲ့ Messenger တို့၊Workstation တို့စတဲ့ ဆားဗစ်တွေဟာ အပိုပါပဲ။) အောက်ကစာရင်းမှာစက်အားလုံးနီးပါးအတွက် မသုံးလည်းဘာမှမဖြစ်တဲ့ ဆားဗစ်တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီ့ပြင်ဆားဗစ်တွေလည်း ရှိပါဦးမယ်။ သတိပေးလိုတာကကိုယ့်စက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ဆားဗစ်စာရင်းကို မိမိဘာသာ ဉာဏ်လေးနဲ့ယှဉ်ပြီးသတ်မှတ်ဖို့ပါ။
AlerterClipbookComputer BrowserDistributed Link Tracking ClientFast User SwitchingHelp and Support - (If you use Windows Help and Support leave this enabled)Human Interface Access Devices (do not disable if you use gamepad like stuffs)Indexing ServiceIPSEC ServicesMessengerNetmeeting Remote Desktop Sharing (disabled for extra security)Portable Media Serial NumberRemote Desktop Help Session Manager (disabled for extra security)Remote Procedure Call LocatorRemote Registry (disabled for extra security)Secondary LogonRouting & Remote Access (disabled for extra security)SSDP Discovery Service - (Unplug n' Pray will disable this)TelnetTCP/IP NetBIOS HelperUniversal Plug and Play Device HostWindows TimeWireless Zero Configuration (Do not disable if you useawireless network)Workstation
ဒီဆားဗစ်တွေကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့....Windows Start menu အောက်က Run ကို ဖွင့်ပါ။ (Windows + R) ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ Run box ထဲမှာ services.msc လို့ရိုက်ပြီး Ok ကိုနှိပ်ပါ။Services Management Console box ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီထဲမှာကိုယ်ပိတ်ချင်တဲ့ဆားဗစ်ကို double click လုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ startup type ကိုDisable လို့ပြောင်းပေးရပါမယ်။ မပြောင်းခင် ဆားဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းချက်အတိုလေးတွေကို ဖတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ (တော်ကြာ ကိုပိုင်ရေတွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်းပဲ ဆိုပြီးဖြစ်မှာစိုးလို့ပါဂျာ)
(7) SPEEDUP FOLDER ACCESS - DISABLE LAST ACCESS UPDATE
ကျနော်တို့ရဲ့ စက်ထဲမှာ folder တွေ၊ sub foldersတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ကျနော်တို့ folder တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Windows ကဒီဖိုလ်ဒါကိုဘယ်အချိန်မှာနောက်ဆုံးသုံးခဲ့သလဲဆိုတာကို ပြဖို့အတွက်အဲဒီဖိုလ်ဒါနဲ့ သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ sub-folder အားလုံးကို စစ်ဆေးပါတယ်။အဲဒါက အချိန်တော်တော်ကုန်စေပါတယ်။ (windows ကလည်းပိန်းပဗျာ။ အမေမှာမှာတဲ့အတိုင်း အကုန်လုပ်တာပဲ။) ကျနော်တို့က ဘယ်ဖိုလ်ဒါကိုဘယ်အချိန်ဝင်ခဲ့သလဲ စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုရင် (ကျနော်သိသလောက် ဘယ်သူမှလည်းသတိထားပြီး ကြည့်မနေပါဘူး) အဲဒီ Feature ကိုအောက်ပါအတိုင်းပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သတိ.. သတိ... registry ဆိုတဲ့ system databasesကိုဝင်ပြင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတိကလေးချပ်ပြီး registry backupလေးဘာလေးလုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှောင်နေလိုက်လို့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီးရင် မေ့ပစ်တတ်တာ လူဆိုတဲ့အမျိုးမို့လို့ပါ။
Windows Start menu အောက်က Run ကို ဖွင့်ပါ။ (Windows + R) ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ Run box ထဲမှာ regedit လို့ရိုက်ပြီး Ok ကိုနှိပ်ပါ။ RegistryEditor Window ပေါ်လာပါမယ်။ ဘယ်ဘက်က pre-defined Keys listထဲမှာ"HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl FileSystem"ထိရောက်အောင် အဆင့်ဆင့်သွားပါမယ်။ ပြီးရင် ညာဘယ်က နေရာလွတ်တစ်ခုခုမှာright click လုပ်၊ ပေါ်လာတဲ့ pop-up menu ထဲက New -> DWORD Value ကိုclick လုပ်ပါ။ New Value #1 ဆိုတဲ့ Key အသစ်ကို'NtfsDisableLastAccessUpdate' လို့ အမည်ပြောင်းပါ။ သူ့ရဲ့ Value Data ကပုံသေ (0) ဖြစ်နေပါမယ်။ အဲဒါကိုပြောင်းဖို့ ကျနော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ keyအသစ်ကို double click လုပ်၊ ပေါ်လာတဲ့ Edit DWORD Value box က Value Dataမှာ 1 လို့ပြောင်းပြီး Ok ပြောပါ။ ပြီးရင် registry editor ကိုပိတ်ပြီးကွန်ပျူတာကို restart or log off လုပ်ပေးရပါမယ်။
(8) IMPROVE BOOT TIMES
Windows Xp မှာ Boot Optimize Function လို့ခေါ်တဲ့ Feature အသစ်တစ်ခုပါလာပါတယ်။ သူက ၀င်းဒိုးစ်စနစ်စတင်ချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ boot ဖိုင်တွေကိုအစီအရီထားပေးခြင်းဖြင့် စက်စတင်ချိန်ကို မြန်စေပါတယ်။ ဒီ Function ကစနစ်တော်တော်များများမှာ ပုံသေဖွင့်ပေးထားပေမယ့် တစ်ချို့စက်တွေမှာပိတ်နေတတ်ပါတယ်။ သူ့ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့....
Go to Start Menu and Click RunType in "Regedit" then click okFind "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDfrgBootOptimizeFunction"Select "Enable" from the list on the rightRight-click on it and select "Modify"Change the value to "Y to enable"Reboot
(9) IMPROVE SWAPFILE PERFORMANCE
တကယ်လို့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်မှာ 256 Mb ထက်ပိုများတဲ့ memoryရှိတယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် စက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ၀င်းဒိုးစ်စနစ်တွေမှာ စက်ရဲ့ physical memoryနည်းလာပြီဆိုရင် swap file (or) pagefile ကို အစားထိုးသုံးပါတယ်။ အဲဒီvirtual memory က physical memory ထက်စာရင် တော်တော်နှေးပါတယ်။ ဒီ Tweakလေးက ကျနော်တို့စက်မှာရှိသမျှ memory နောက်ဆုံး 1 Mb ကျန်သည်အထိစက်ကိုအသုံးပြုစေပါတယ်။ ပြီးမှ swap file ကိုသုံးစေပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းပြင်ပေးရပါမယ်။
Go to Start then RunType "msconfig.exe" then okClick on the System.ini tabExpand the 386enh tab by clicking on the plus signClick on new then in the blank box type"ConservativeSwapfileUsage =1"Click OKRestart PC
(10) IMPROVE MEMORY USAGE
အောက်မှာပေးထားတဲ့ Cacheman ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးက ကျနော်တို့စက်မှာရှိတဲ့disk cache, memory နဲ့ အခြားအသုံးဝင်မယ့်အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
1.Go to Show Wizard and select All2.Run all the wizards by selecting Next or Finished until you are backto the main menu. Use the defaults unless you know exactly what you aredoing.3.Exit and Save Cacheman4.Restart Windows
(11) OPTIMISE YOUR INTERNET CONNECTION
ကိုယ့်ရဲ့ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မြန်နှုန်းကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွယ်ဆုံးက အောက်က Tool ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး setting တွေချိန်ပေးပါ။
-General Settings tab ကို ဖွင့်ပြိး ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ရွေးချယ်ပေးပါ။-Network Adapter tab ကိုဖွင့်ပြီး ကိုယ်အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားသလဲဆိုတာ ရွေးချယ်ပေးပါ။-အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိဖို့ Optimal Settings ကို ရွေးပြီး Apply button ကို နှိပ်ပေးပါ။-စနစ်ကို restart လုပ်ပါ။
(12) RUN BOOTVIS
ဒီ BOOTVIS ဆိုတဲ့ Tool က စနစ်ရဲ့စတင်ချိန်ကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။
1. Run Bootvis2. Select Trace3. Select Next Boot and Driver Trace4. A Trace Repetitions screen will appear, select Ok and Reboot5. Upon reboot, BootVis will automatically start, analyze and log yoursystem's boot process. When it's done, in the menu go to Trace andselect Optimize System6. Reboot.7. When your machine has rebooted wait until you see the OptimizingSystem box appear. Be patient and wait for the process to complete.
(13) DEFRAGMENT YOUR PAGEFILE
Windows စနစ်တွေရဲ့ Performance ကို မြန်စေတဲ့အရာတွေထဲမှာ pagefileလို့ခေါ်တဲ့ virtual memory ကို အမြဲတမ်း defragmented ဖြစ်စေတာလည်းတစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်နေအောင် နည်းလမ်းတော်တော်များများရှိပါတယ်။တစ်ခုက ကျနော်တို့ရဲ့စက်မှာ partition တစ်ခုသပ်သပ်ဖန်တီးပြီး pagefileတစ်ခုတည်းသုံးဖို့ သတ်မှတ်ပေးတာပါ။ နောက်တစ်ခုက အမြဲတမ်း pagefiledefragmented ဖြစ်နေစေဖို့ PageDefrag ဆိုတဲ့ Tool လေးကို run ပေးတာပါ။ကျနော်တို့စက်စတင်ချိန်တိုင်းမှာ pagefile ကို defrag လုပ်အောင်ချိန်ညှိထားလို့လည်းရပါတယ်။
Gmailaddress တစ်ခုကို သိရုံနဲ့ သူဟာ ဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ သူ့ဆီကို Mail တစ်စောင်ပို့တဲ့အခါ သူဟာ အဲဒီ မေးလ်ကို ဖတ်လားမဖတ်လား ဆိုတာကိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ Website နှစ်ခုကို အသုံးပြုပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးတစ်ခုက Spypig ပါ။
Browser ကနေ New Windows တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Windows တစ်ခု ထပ်ဖွင့်ပြီး ကိုယ့် Gmail ကိုဖွင့်ထားပါ။ Compose Mail ကိုနှိပ်ထားပါ။Spypig ရဲ့ Step1 Text box မှာ ကိုယ့် email ကိုရိုက်ပါ။
Step2 မှာ Subject ထည့်ပါ။
Step3 မှာပေးထားတဲ့ ပုံတွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်တာကို ရွေးပါ။
Step4 မှာ3ကိုရွေးပါ။ပြီးရင် Click to Activate My Spypig ဆိုတဲ့ button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။အဲဒီအခါ အောက်မှာ စက္ကန့်တွေပါတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီပုံလေးကို နှိပ်ဆွဲပြီး Gmail ရဲ့ Body ထဲမှာ လွှတ်ချလိုက်ပါ။ပြီးရင် တခြားစာလေးဘာလေးစသည်ဖြင့် ရိုက်ထည့်ပြီး Send ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့သူက ကိုယ့် Mail ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Spypig ဟာ Mailဖတ်ပြီးတဲ့အကြောင်း သတိပေးစာကို ကိုယ့် Gmail ဆီပြန်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။အဲဒီထဲမှာ ဖတ်တဲ့သူရဲ့ IP လည်း ပါပါတယ်။ဒါဆို သူ့ရဲ့ IP သိသွားပါပြီ။ ဘယ်နိုင်ငံကလဲ ဆိုတာကိုတော့
ကိုဖွင့်ပြီး အစောက IP ကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်သူဟာ ဘယ်နိုင်ငံကလည်းဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
မိမိကွန်ပျူတာရှိ Window Media Player တွင် File Menu> Open URL ဆိုတဲ့နေရာမှာhttp://energy08.egihosting.com/22109/ (သို့မဟုတ်) mms://energy08.egihosting.com/22109/ထည့်ပြီး နားဆင်နိုင်ပါတယ်။website link လေးကတော့ http://www.eainmathlaing.com/ ပါ။
Window Media Player တွင် File Menu> Open URL ဆိုတဲ့နေရာမှာhttp://89.238.146.148/APYTZ ထည့်ပြီး နားဆင်နိုင်ပါတယ်။website link လေးကတော့ http://www.apytz.net/ ပါ။ တိုက်ရိုက်ကလစ်နှိပ်ပြီးလည်း နားထောင်လို့ရပါတယ်။
Window Media Player တွင် File Menu> Open URL ဆိုတဲ့နေရာမှာhttp://216.32.71.182/MYMC (သို့မဟုတ်) http://www.mymclub.net/radio ဆိုပြီး နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Start + M - ဖွင့်ထားတဲ့ windows တွေကို ချုံ့ပြီး taskbar ပေါ်မှာ နေရာချပေးပါလိမ့်မည်။
Start + Shift + M - task bar ပေါ်မှာချုံ့ပြီး ခဏနေရာချထားတဲ့ windows တွေကို size ကြီးပြန်ချဲ့ပေးပါ တယ်။
Start + E - Windows ရဲ့ အင်ဂျင်စက်ခန်းလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ windows explorer ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Start + R - Start menu မှာရှိတဲ့ "Run" box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Start + F - windows search dialog box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Start + Ctrl + F - search box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။တကယ်လို့ computer ဟာ network ချိတ်ဆက် ထားရင် computer dialog box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Start + Pause (Break) - System properties dialog box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
F1 - အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်ရင် နှိပ်ပါ။
Ctrl + Esc - Start Menu ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Alt + Tab - ဖွင့်ထားသော Program တွေ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ကိုကူးပြောင်း အလုပ်လုပ်စေနိုင်ပါ သည်။
Alt + F4 - ဖွင့်ထားတဲ့ Program ကနေထွက်ခွာစေပါတယ်။
အလုပ်လုပ်လျက်သားဖြစ်နေရင် သာမာန်ပုံစံအတိုင်း "save" လုပ်မလားလို့ မေးပါလိမ့်မယ်။
Shift + Del - Select ပေးပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုကို အပြီးတိုင် ဖျက်ဆီးပစ်ပါလိမ့်မည်။
Ctrl + C (copy) - မိတ္တူပွားပေးပါတယ်။
Ctrl + X (cut) - တစ်နေရာမှတစ်နေရာကို ကူးပြောင်းနေရာရွှေ့ဖို့အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ပါ။
Ctrl + V (Paste) - မိတ္တူပွားပြီးသား ဖိုင်တစ်ခုကို ပြန်လည်နေရာချထားပေးပါတယ်။
Ctrl + Z (undo) - undo လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အလုပ်ကို မနှစ်သက်တဲ့အခါ မူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်ရောက်စေပါတယ်။
Ctrl + B (Bold) - Document အတွင်းမှာရှိတဲ့ text တွေကို ပိုမိုထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
Ctrl + U (Underline) - Document တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ text အောက်ခြေမှာ မျဉ်းတားလိုတဲ့အခါ သုံးကြပါတယ်။
Ctrl + I (Italic) - Document တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ text တွေကို စောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
Shift + right click (တစ်ချက်) - Right click နှင့်တူသည်။ active windows ရဲ့ display menu ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Shift + Left click (နှစ်ချက်) - File (သို့) Folder ရဲ့ properties ကိုပြပေးပါတယ်။ Alt + left click (နှစ်ချက်)
F10 - Menu bar မှာရှိတဲ့ Options တွေကို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
Shift + F10 - ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုအတွက် "shortcut" ဖိုင်ငယ်ကလေးတစ်ခုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
Alt + down arrow - drop down list box ကျလာစေပါတယ်။
Software တစ်ခုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခြားနေရာ တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် features တိုင်း၌ လုပ်ဆောင်စွမ်း box ငယ်လေးများကိုယ်စီ ရှိကြသည်။
Alt + Tab - ဖွင့်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းအား တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကြားကူးပြောင်းစေနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့Alt Key ကိုဖိထားပြီး Tab Key ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ဆဲလုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှကို အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပြီးလုပ်ငန်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Shift + ? - တကယ်လို့ shift key ကို ဖိနှိပ်ထားပြီး CD-ROM ဒါမှမဟုတ် DVDတစ်ချပ်ကို ထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ CD/DVD ရဲ့ "Auto Run" boxတက်လာပါမယ်။CD မှာ virus ပါဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ ကို စစ်ဆေးလိုတဲ့ အခါမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Alt + Space - Restore, move, size, minimize, maximize စတဲ့ command တွေပါဝင်တဲ့ system restore box ကိုပြပါတယ်။
Alt + hyphen - Multiple Document Interface ကိုပြသပေးပါတယ်။
Alt + underlined letter - Software တစ်ခုအတွင်းမှာ သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်options bar ရဲ့ feature တွေမှာ မျဉ်းတားထားတဲ့ စာသားလေးတွေမျိုးစုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Alt ကိုဖိနှိပ်ထားပြီး အခုန စာသားလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ "feature" ရဲ့ "drop down box" (ပါဝင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ) ပွင့်လာပါမည်။
Ctrl + F4 - address bar ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Alt + F6 - Alt + tab အလုပ်လုပ် ပုံအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Selected objects and Shell objects
F2 - ရွေးချယ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကို နာမည်အသစ်ပြန်ပေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေစေပါတယ်။
F3 - File တွေကို အကုန်လုံး ကိုရှာပေးမယ်။
Alt + Enter - ရွေးချယ်ထားတဲ့ အရာဝတ္ထုရဲ့ properties ကိုဖော်ပြပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့Search Engine များဖြစ်ကြတဲ့ Google,Yahoo,MSN တို့ကို ကောင်းမွန်စွာမိမိလိုချင်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေတက်ပြီလား..။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများ အနေဖြင့်တစ်နည်း မဟုတ် တစ်နည်းကွန်ပျူတာဆိုင်ရာပြသာများနှင့် ကြုံတွေ့ကြရာဝယ် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နည်းနာနိသာယများ၊နောက်ဆုံးပေါ် software products များ၊ဗိုင်းရပ်နှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများသတင်း အချက်အလက်များကို ရှာဖွေဖို့လိုအပ်လာပါပြီ သင်မည်သည်နည်းနှင့် သင်လိုချင်သော အရာများ အခက်အခဲ များကို ဖြေရှင်းခဲ့ပါသလဲ....နည်းပညာဆိုင်ရာ မြန်မာဖိုရမ်များ၊ဘလော့များတွင် သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့တာ လား?နီးစပ်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများမှ အကူအညီတောင်းခံ ဖြေရှင်းခဲ့တာလား ?ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင် သင့်ပြဿနာ လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာလား နောက်ဆုံးမေးမြန်းချင်တာ တစ်ခုက သင် Search Engineများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုတက်ပြီလားဆိုတာပါပဲ အောက်ဖော်ပြ အချက်အလက်များကတော့ အင်တာနက်မှ လိုချင်တဲ့ Informations များ ကို ပိုမိုတိကျကောင်းမွန်သော result များရရှိအောင် keyword များနှင့် အပေါင်း(+) ၊အနှုတ်(-)၊လက္ခဏာများဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပုံ တွေဖြစ်ပါတယ်...။SearchEngine အပေါ်လိုက်ပြီး အနည်းငယ် ကွဲပြားမှု့ ရှိနိုင်ပေမဲ့ Search Engineအများစုမှာ သုံးနိုင်တဲ့ အခြေခံ အကျဆုံး tip များပဲဖြစ်ပါတယ်
Tip1) "1" ကို ကိုယ်အဓိကလိုချင်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ keyword ရဲ့ရှေ့မှာ ထည့်ပေးရပါတယ်ဒါမှသာ မလိုအပ်ပဲ Related index များကို ရှာဖွေခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး page index အားလုံးမှာမိမိသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ Keyword ပါကို ပါရမည်ဟု စေခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ - +ဖန်ခါးမြေ+ကိုဖြိုးငြိမ်း
(သတိထားရမှာကတော့ + နှင့် keyword ကြားတွင် space bar မခြားရပါ)ဒါဆိုရင် ရရှိလာတဲ့ webpage စာမျက်နှာတိုင်းမှာ ဖန်ခါးမြေ၊ကိုဖြိုးငြိမ်း ဆိုတဲ့ စကားလုံးနှစ်လုံး ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
Tip2)"-" အင်တာနက်မှ ရှာဖွေရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ မိမိ ရှာဖွေသော အကြောင်းအရာနှင့် တိုက်ဆိုင်ဆီလျှော်ခြင်းမရှိသော အကြောင်းအရာများ ကန့်လန့် ကန့်လန့် ပါဝင်နေလေ့ရှိပါတယ် မြန်မာဘာသာစကားနှင့် ရှာဖွေရာတွင် ပိုမိုသိသာစွာ ကြုံတွေ့ရတာကို တွေ့ရပါတယ် "-"ကိုတော့ ကိုယ်မလိုချင်တဲ့keyword ပါတဲ့ webpage များကို ချန်လှပ်ခဲ့ဖို့ ခိုင်းလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဥပမာ - -ကိုဖြိုးငြိမ်း+ဖန်ခါးမြေ
Result အဖြစ် SEO မှရှာဖွေပေးလိုက်သော web page စာမျက်နှာတိုင်းတွင် ကိုဖြိုးငြိမ်း ဆိုသောစကားလုံး လုံးဝ ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး
Tip3) keyword တစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ပဲ phrase စကားစု၊အသုံးအနှုန်းများကို ရှာဖွေလိုတဲ့အခါမှာdouble quotation " " ကိုအသုံးပြုရပါတယ် ဒါမှသာ SEO မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စကားစု ပါဝင်တဲ့web page များကိုသာလျှင် ဖော်ပြပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ- " somebody dream about you every single night"
result အနေနဲ့ ကတော့ " somebody dream's about you every single night" ပါရှိတဲ့ webpageများကိုသာ ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်
Tip 4) Tilde(~) ဆိုတဲ့ သင်္ကေတ ဟာ သင်္ချာဘာသာရပ်မှာ အနီးစပ်ဆုံး approximately ဆိုတဲ့သဘောဆောင်တယ်ဆိုတာ အများသိပြီးဖြစ်ပါတယ် ဒီ operator ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် ဆက်နွယ်သော web page မှန်သမျှကို ရှာဖွေချင်တဲ့အခါတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
ဥပမာ computer~hacksဟုရှာဖွေလျှင် hack နှင့်ဆင်တူ ဆက်နွယ်သော web page စာမျက်နှာများကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်
Tip 5) စကားစု(phrase) များနှင့် စကားလုံးများကို တွဲဖက်အသုံးပြုလိုတဲ့ အခါမှာတော့ +,-" " သင်္ကေတ ပုံစံဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ဥပမာ- +"The others"+ house-ghostဒါဆိုရင်တော့ Search Engine ကို The others ဆိုတဲ့ စကားစုပါရမယ် house ဆိုတဲ့ စကားလုံးလဲပါရမယ် ghost ဆိုတဲ့ စကားလုံးမပါဝင်တဲ့ webpage များကို ရွေးချယ်ရှာဖွေ ခိုင်းလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်
Tip 6)အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေရာတွင် stop words လို့ခေါ်တဲ့ a,an,by,the,be အစရှိသော စကားလုံးများဟာ အင်္ဂလိပ်စာတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ ရှိတဲ့အတွက် ဒီစကားလုံးများကိုထည့်သွင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့် ထိ ရောက် မှု့ မရှိတဲ့အပြင် ရှာဖွေမှု့ အချိန်ကိုပိုမိုကြန့်ကြာစေပါတယ် ဥပမာ အားဖြင့် the personal firewallဟုထည့်သွင်းရှာဖွေလိုက်တဲ့ အခါမှာ "the" ဟာ web page တိုင်းတွင်ပါဝင်နိုင်သော စကားလုံးဖြစ်တဲ့ အတွက် ရှာဖွေချိန်ကို မလိုအပ်ပဲ ကြာမြင့်စေပါတယ်ဒီတော့ stop words ကို ရှာဖွေရာတွင် အသုံးမပြုပဲ ဖယ်ထားသင့်ပါတယ်
Tip 7)လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှာဖွေတဲ့ အခါမှာ မိမိလိုချင်တဲ့ file typeအမျိုးအစားကို "filetype:" ဆိုတဲ့ syntax အသုံးပြုပြီး တစ်ခါတည်း သတ်မှတ်ရှာဖွေ ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဥပမာ - "Search Engine"filetype:pdf
Tip 8)ကိုင်ပိုင် ၀က်ဆိုဒ်၊ဘလော့ ရှိသူများအနေဖြင့် မိမိ ဆိုဒ်အား မည်သည့် ဆိုဒ် ဘလော့မှ လင့်ထားသလဲ သိလိုလျှင် link: ဆိုတဲ့ syntax ကိုအသုံးပြုနိင်ပါတယ်ဥပမာ-link:www.fankharmyay.co.cc